TWRP 101s – Xiaomi Guide
TWRP, ARB, BLU, Custom ROMs, XDA Forum, Xiaomi Forum, Magisk Root, Maigsk Manager, Boot patch, OTA Update စတာလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စပ်မိစပ်ရာ တိုတိုထွာထွာလေးတွေပေါ့ခင်ဗျာ….။ သည် post ထဲမှာ အဲဒါလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်တာတွေကို ကွန်ပျူတာမှာ Manual command ရိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုပဲ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ သဘာဝတွေကို နားလည်နေရင် ဘယ်ဖုန်း brand ဘယ် Model ကိုမဆို ဘာပဲလုပ်လုပ် idea ကရှိနေပြီး ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်လို့ရပြီဆိုတာမျိုး စိတ်ကူးပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
အခုလိုတွေလုပ်ဖို့ အရင်ဆုံး လိုအပ်တာကတော့ ဖုန်းသည် Boot loader unlock လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်ရမှာပါပဲ။ ဘယ်ဖုန်းကိုမဆို Boot loader lock နဲ့လာရင် official way ဘယ်လို unlock လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ ဖုန်းရဲ့ fun forum တွေမှာ နည်းလမ်းတွေ ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Official unlock ဆိုတာကို ခွင့်မပြုတော့တဲ့ Huawei တွေလိုဆိုရင်တော့ ဘယ် tool, ဘယ် file တွေသုံးပြီး သတ်သတ်လိုက်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာ လေ့လာရှာဖွေရတော့မှာပေါ့။ Official Unlock လုပ်ခွင့် ပေးထားတာတွေအတွက်ကတော့ forum တွေမှာ နည်းတွေဖတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ယူရုံပါပဲ။ Tools, Files တွေ သတ်သတ် ရှာဖွေနေစရာ မလိုပါ။ အသင့်ပေးထားတာတွေ တွေ့မှာပါ။
Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက်တော့ Boot Loader Unlock ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ သည် Post [ –> How to Unlock Boot Loader (Xiaomi) < — ] ကိုဖတ်ရှုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဲသည်ထဲမှာ ဥပမာ TWRP သွင်းတာ.. TWRP ထဲ boot တက်တာ စတာတွေကို command ရိုက်ပြီးလုပ်ရင် အဆင်ပြေစေအောင် adb, fastboot နဲ့ဆိုင်တာတွေကို Windows System Path ထဲမှာ ပါအောင် ဘယ်လိုထည့်ပေးထားရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ရှင်းလင်းပြထားပါတယ်။ အချို့က အဲဒါတွေ နားမလည်၊ မလုပ်ပဲ သည် command ရိုက်ပါဆိုလို့ရိုက်တယ်။ ပုံမှာ ပြထားသလို result လဲထွက်မလာဘူးဆိုပြီး တစ်နေတာ တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မိမိလုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာမှာ ပြည့်စုံနေအောင် ပြင်ဆင်ထားမှ ဘယ်နေရာမှာ Command Windows ခေါ်ပြီး ဘယ် adb, fastboot commands တွေကိုရိုက်ရိုက် Windows က နားလည်ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပေးမှာပါ။ အဲသည် post ထဲမှာ Xiaomi USB Drivers တွေကို ဘယ်လို Install လုပ်မလဲဆိုတာ အလွယ်ဆုံး လုပ်နည်းကို ရေးပေးထားပါတယ်။ Windows 32bit, 64bit ဆိုပြိး ခွဲခြား လိုက်လုပ်နေစရာ မလိုလှတော့ပါ။ အလွယ်ဆုံး လုပ်နည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Windows 64 bit ဖြစ်နေခြင်းသည်ကပဲ Xiaomi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Boot Loader Unlock tool, Mi Flash Tool နောက်ဆုံး version တွေသုံးဖို့ အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ BLU Tool ကလည်း နောက်ဆုံး version လိုမှမဟုတ်ရင် Unlock လုပ်မပေးတာတွေ တွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်။ USB Drivers တွေအတွက်လဲ သီးသန့်ရှာဖွေစရာ မလိုပါဘူး။ BLU Tool ထဲမှာပဲ ပါပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ADB, Fastboot ကနေလုပ်ဖို့ လိုတာတွေ ပြင်ဆင်တာကို အဲသည် post မှာရေးထားတာတွေ လုပ်ထားခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေစေမှာပါ။ EDL, MTK Meta Mode တို့ကနေ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် Qualcomm, MTK Drivers တွေ တင်တာကတော့ အခြား သတ်သတ် post တွေမှာ ရှာဖွေဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Blog ထဲမှာ ရေးထားပြီးသား အကုန်ရှိပါတယ်။
TWRP နဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် ရှာမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး TWRP Official Site မှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။ Official လို့ဆိုရာမှာ ဖုန်း brand တော်တော်များများမှ ဖုန်း Model တော်တော်စုံစုံလင်လင်အတွက် TWRP တွေကို ပြုလုပ်ပေး၊ Maintain လုပ်ပေး၊ Version Update လုပ်ပေးနေတဲ့ Developer အဖွဲ့ရဲ့ web site မို့လို့ခေါ်တာပါ။ ကိုယ့်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူက Official support ပေးထားတဲ့ဟာတွေလို့ မဆိုလိုပါ။ Xiaomi တွေမှာ အခြားသော Cofface, ZCX, Red Wolf စတဲ့နာမည်နဲ့ TWRP တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေက ဝါသနာပါသူ တစ်ဦး၊ လူအနည်းငယ်လောက်ကပဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားပြီး သူတို့ ကြိုက်တဲ့ နာမည်လေးတွေပေးထားတာပါ။ Team Win Recovery Project ကြိးလို အမြဲ Maintain လုပ်.. Up to date လုပ်နေပေးဖို့တော့ သိပ်မဖြစ်နိုင်လှဘူးပေါ့။ သည် link [ –> Official Xiaomi TWRPs <– ] ကို နှိပ်ဝင်လိုက်ရင် Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက် Team Win Recovery Project က လုပ်ပေးထားတဲ့ TWRP တွေကို သွင်းနိုင်တဲ့ ဖုန်း Model တွေ ပေါ်လာမှာပါ။ မိမိဖုန်း Model ကိုရွေးပြီး နောက်ဆုံး TWRP version, သို့တည်းမဟုတ် မိမိနှစ်သက်ရာ အရင် version … စတာကို ရှာဖွေ download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။
အချို့ဖုန်း Model တွေက Official TWRP မထွက်ပါ။ အချို့တွေက Model အသစ်ပေါ်လာလာချင်း Official TWRP က ထွက်မလား မထွက်မလား မသိသေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော Features အသစ်လေးတွေနဲ့ ဘယ်သူလုပ်ပေးထားတဲ့ ဘယ် TWRP လေးတွေရှိနေအုံးမလဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပိုဖြစ်တာလေးတွေများ ရှိမလားဆိုတာ ရှာဖွေချင်ရင် XDA Forum, Xiaomi Fourm တွေမှာ ရှာဖွေယူနိုင်ပါတယ်။ Official ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားသော developer တွေက လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်.. သူတို့တင်ပေးတဲ့ post တွေမှာ TWRP Features, Version တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား change logs စတာတွေ သေချာဖတ်ပါ။ အဲလိုဆိုရင် Encrypt data partition ကိုဖတ်ပေးနိုင်လို့ format data မလိုဘူး။ ဘယ် partition တွေကို backup အနေနဲ့ယူထား ပြန်ထည့် တာတွေလုပ်နိုင်မယ်။ Custom rom flash တာတင်မဟုတ်ပဲ အခြား partition အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ persist, cust စတဲ့ image file တွေကို twrp ကနေပဲ တိုက်ရိုက်တင်ပေးလို့ရမယ်.. စတာတွေကို ခန့်မှန်းနိုင်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
About XDA Forum
Xda forum မှာ မိမိဖုန်းအတွက် လိုတာတွေ ရှာဖွေချင်တယ်၊ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် သည် link [ –> XDA Forum <– ] ကို ဝင်ပါ။ ပုံမှာပြထားသလို Search နေရာမှာ မိမိဖုန်း Model နာမည်လေးရိုက်ရင် Forum မှာ Tag လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်း model အတိအကျနဲ့ Tag ကျလာပါမယ်။ ရွေးလိုက်ရင် မိမိဖုန်း model နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ရှိနေတဲ့ Threads တွေရှိနေတဲ့ နေရာ ရောက်ပါပြီ။ အဲသည်မှာမှ ROMs, Kernels, Recoveries & Other Development အောက်ထဲ ဆက်ဝင်ရင် Custom Recoveries တွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် Custom ROMs ပေါင်းစုံကိုလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မိမိစိတ်ဝင်စားရာ အခြား Threads တွေထဲ ဝင်ပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါက Recovery ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ နမူနာပြတာပါ။ တစ်ခါတလေလည်း TWRP တွေက အခြားသော ခေါင်းစဉ် Section အောက်မှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သည်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေအောက်ဝင်ပြီး Threads title လေးတွေ လိုက်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိလိုချင်တာ ရှိနေမလားဆိုတာ မှန်းဆနိုင်မှာပါ။
About Xiaomi Forum
Xiaomi Forum နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ သည် link [ –> Xiaomi Global Forum <– ] ကိုဝင်ရင် ဖုန်း model တွေအစုံကျလာပါမယ်။ မိမိ model ကိုရွေးပြီး ဆက်ဝင်ပါ။ အဲသည်မှာမှ Tools, Tips & Tutorials အောက်ထဲဆက်ဝင်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Post ခေါင်းစဉ်တွေ လိုက်ဖတ်ပြီး အသေးစိတ်ကို ဝင်ဖတ်ရှာနိုင်ပါတယ်။ အခြားသော ကလိချင်စရာ၊ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဖြေရှင်းစရာ လုပ်နည်း Tutorials လေးတွေ ရေးထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါ ပုံလေးတွေ အတိုင်းပေါ့ခင်ဗျာ…..။
Chinese Xiaomi Forum မှာလဲ လိုတာရှာနိုင်ပါတယ်။ အခြား ဘယ်မှာမှမရှိပဲ အဲသည်မှာပဲ ရှိနေတတ်တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းအသစ်လို ထွက်ထွက်ချင်း အဲသည်မှာ အရင်ရှိနေတတ်တာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သူကတော့ Chrome browser နဲ့လင့်ဖွင့်၊ Chrome browser ရဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Translate feature သုံးပြီး လိုက်ဖတ်ရင် English လို အနည်းငယ်ဖတ်ကြည့်လို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ သည် link [ –> Chinese Xiaomi Forum <– ] ကို ဝင်ရင် ဖုန်း Model အစုံကျလာမှာပါ။ မိမိဖုန်း Model ကိုရွေး၊ ပုံလေးတွေအတိုင်းကြည့်ဝင်ရင် မိမိနှစ်သက်ရာ နည်းလေးတွေ ရှာဖွေဖတ်ဖို့ အဆင်ပြေစေပါမယ်။
အထက်က အကြောင်းအရာတွေကတော့ TWRP, Custom ROMs တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လိုချင်တာလေးတွေရှာမယ်။ ကလိချင်တာ၊ Fix ချင်တာလေးတွေ ရှာမယ် ဖတ်မယ် ဆိုတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပါ။ Normal user အတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ 4PDA ဆိုတဲ့ Russia forum တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ သူက စာဖတ်လို့တော့ကောင်းပါတယ်။ file ဒေါင်းဖို့ဆိုရင်တော့ သူ့ forum မှာပဲတင်တာများလို့ forum account ဝင်မထားရင် ဒေါင်းမရနိုင်ပါ။ သူ့ထဲတော်တော်များများကလဲ XDA ကဟာကိုပဲ ဆက်သွားတာများလို့ ထူးထွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ သည်လောက်ဆို သိချင်တာ လိုချင်တာ ရှာဖွေဖို့ Normal user တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်သည့်အတွက် တစ်ခန်းရပ်ကြတာပေါ့ ခင်ဗျာ.. 😀 😀
TWRP တွေသည် (တစ်နည်းအားဖြင့် Custom Recovery တွေသည်) Image file တွေအနေနဲ့လာပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Partition မှာ သွင်းပေးရပါတယ်။ အောက်ပါပုံလေးကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းမှာပါတဲ့ partition တွေနာမည်ကို block numbers တွေအနေနဲ့မဟုတ်ပဲ human readable ဖြစ်တဲ့ partition name တွေအနေနဲ့ပေါ်လာအောင် adb command သုံးပြီး ကြည့်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ recovery partition နဲ့ သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ block number ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသော ကိုယ်တွေသုံးလေ့ရှိတဲ့ system, userdata, cust, persist, modemst1, modemst2…. စသည်ဖြင့်တို့ရဲ့ partition name တွေ block number တွေကို တွေ့မြင်မှာပါ.. ဖုန်း model တစ်ခုနဲ့တစ်ခု partition name သာ တူချင်တူမယ်။ block number မတူတတ်တာတွေရှိပါတယ်။ block number တွေနဲ့ partition name တွေ တွဲသိအောင်လုပ်တာကလဲ တစ်ခါတလေ image file တွေကို twrp ကနေ flash လို့ရအောင် twrp flashable zip တွေလုပ်ပြီး updater script မှာ adb command တွေရေးတဲ့အခါ block number တွေနဲ့ညွှန်းပေးရင် ကိုယ်လိုချင်သလို တိတိကျကျဖြစ်တာမျိုးတွေလိုမျိုးဖြစ်ဖို့၊ ကိုယ်လုပ်မယ့် command က block number အနေနဲ့ပဲ ညွှန်းပေးရမှာမို့.. စသည်ဖြင့်တွေမှာ ဘယ် partition က block number ဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးတွေ သိထားရအောင် ကြည့်ထား၊ မှတ်ထားခြင်းမျိုး လုပ်ကြတာပါ။
ကဲ.. TWRP သွင်းဖို့ ဘာတွေရှိရမလဲ။ ဘာအထာလေးတွေကို သိထားရမလဲ။ ကိုယ်က TWRP ကိုသွင်းချင်တာ ဘာလုပ်ချင်လို့ သွင်းချင်တာလဲ… စသည်ဖြင့်တွေ စဉ်းစားထားရပါမယ်။
ပထမဆုံးတော့ ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ TWRP က ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့အဆင်ပြေမလား မပြေဘူးလား အရင်စမ်းသပ်မယ်။ ဘာတွေ ဆက်လုပ်ပေးဖို့လိုမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းမယ်ခင်ဗျာ..။ အဲသည်အတွက် ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ twrp image file ကိုသုံးပြီး ဖုန်းကို boot တက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်။ ဖုန်းမှာ Normal boot တက်မယ်။ ပုံမှန် အတိုင်း Home Screen ပေါ်မယ်။ သုံးချင်တာသုံးမယ်။ သည်အလုပ်တွေကို ထိန်းကျောင်းလုပ်ပေးနေတာ Android OS Kernel ပါ။ ဖိုင်အနေနဲ့မြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် firmware ထဲမှာပါတဲ့ boot.img ပါပဲ။ ဘယ် partition မှာသွင်းထားတဲ့ဟာလဲဆိုရင် boot partition မှာ သွင်းထားတာပါ။ TWRP ပဲဖြစ်ဖြစ်.. Firmware တင်တာနဲ့ တစ်ပါတည်းပါလာတဲ့ Stock Recovery လို့ဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အဲဒါတွေက Special Kernel တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Normal အတိုင်း ဖုန်းဖွင့်လိုက်ရင် Normal Kernel နဲ့တက်မယ်။ ပုံမှန်အသုံးချတာတွေ သုံးလို့ရမယ်။ Special Kernel နဲ့တက်ခိုင်းရင် သက်ဆိုင်ရာ ဖုန်း firmware, system ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ management tasks တွေလုပ်လို့ရမယ်။ Recovery Mode ကို ဝင်တယ်ဆိုတာသည် ပုံမှန် Kernel နဲ့ ဖုန်းမတက်စေတော့ပဲ Special Kernel နဲ့ တက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Mode တစ်ခုထဲ ဝင်လိုက်ခြင်းပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကို fastboot mode ဝင်ထားပြီး ကွန်ပျူတာကနေ fastboot command ရိုက်ပေးပြီး ဘယ် Mode ကို ဘယ် image file သုံးလို့ တက်သွားပါဆိုတာမျိုး ညွှန်ကြားပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ TWRP image file ကိုသုံးပြီး boot တက်ပါလို့ command ရိုက်ပေးလိုက်ရင် ဖုန်းဟာ Normal mode မတက်ပဲ TWRP Recovery mode ထဲရောက်သွားပါမယ်။
ဖုန်းကို TWRP image file ကိုသုံးပြီး Recovery Mode ထဲကို Boot တက်သွားစေခြင်းဖြင့် ကိုယ်သုံးမယ့် TWRP file ဟာ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့အဆင်ပြေလား..။ အထဲတွေ ဆက်ဝင်ဖို့တွေရလား။ Touch ပိုင်းတွေ အဆင်ပြေရဲ့လားပေါ့။ TWRP ထဲတော့ ဝင်ပြီ။ ဘာနှိပ်နှိပ်၊ ဘာဆွဲဆွဲမရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Power Key တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Screen Off သွားပါမယ်။ ပြီး ပြန်နှိပ်လို့ ပြန် ON လိုက်ပါ။ TWRP Lock Screen ပေါ်လာပါမယ်။ Screen အောက်ခြေက မျှားလေးကို ညာဖက်ဆွဲပေးလိုက်ပါ။ အဲသည်အထိ Touch မရသေးရင် Power Key တစ်ချက်နှိပ်ပြီး screen off၊ ပြန် ON စသည်ဖြင့် လေးငါးခါ try ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ မည်သို့မှမပြေလည်ရင်တော့ TWRP ပြောင်းသုံးဖို့ပဲ ကြိုးစားကြည့်ရတော့မှာပါ။ ဒါတွေကလဲ ဖုန်း model အသစ်ထွက်ခါစ၊ စစချင်း ထွက်လာတဲ့ twrp တွေမှာ ဖြစ်တတ်တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ TWRP လုပ်ပေးသူ များလာပြီး share ပေးတာတွေမှာ တစ်ခုခုနဲ့ အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ File တွေ Flash ဖို့ Internal Storage ကိုမြင်လား။ SD Card ထည့်ထားရင် မြင်ရဲ့လား။ OTG Stick တပ်ထားရင် မြင်ရဲ့လား။ ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားရင် ကွန်ပျူတာမှာ Drive တစ်ခုလိုပေါ်ရဲ့လား။ ကွန်ပျူတာနဲ့ files တွေ အကူးအပြောင်း လုပ်ပေးလို့ရရဲ့လား။ အဲဒါတွေကို စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်ရင်း သိရှိနိုင်ပါပြီ။
Boot Loader Unlock post မှာ ညွှန်ကြားထားတဲ့ အချက်တွေအတိုင်း ကွန်ပျူတာကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရင် အောက်မှာ ဆက်လက်ပြောသွားမယ့် command တွေရိုက်လုပ်တာဟာ မိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်း အမြဲအဆင်ပြေစေပါပြီ။
ဖုန်းကို Power ပိတ်ထား။ Vol Down + Power Key ကို ခပ်ကြာကြာလေးတွဲနှိပ်ပေးထားရင် Fastboot mode ရောက်ပါတယ်။ ရောက်လို့ Mi Bunny အရုပ်လေးနဲ့ပေါ်လာရင် ကွန်ပျူတာမှာ USB Cable နဲ့ချိတ်ပါ။ ဖုန်းက Logo ပဲရပ်နေတာ၊ boot လည်နေတာမျိုးမှာလဲ အဲသည် Keys နှစ်ခုသာ ကြာကြာလေးနှိပ်ပေးရင် fastboot mode ရောက်ပါတယ်။ ပြီးမှ ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ် ကိုယ်လိုတာ လုပ်မယ်ပေါ့…။
TWRP image file ကို ဒေါင်းပြီး သိမ်းထားတဲ့ Folder ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Shift Key + Mouse Right Click ကို files, folders တွေနဲ့လွတ်နေတဲ့ တစ်နေရာမှာနှိပ်လို့ ပေါ်လာတဲ့ Shortcut Menu ကနေ Open Command Windows Here ကိုရွေးပါ။ Windows 10 ဖြစ်ပြီး latest update တွေဖြစ်နေရင် Open Power Shell Windows Here ပေါ်မှာပါ။ ရွေးလိုက်ပါ။ command တွေရိုက်ပြီး လုပ်ရတာ တူတူပါပဲ။
ကိုယ်ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Folder ထဲမှာ ရှိတဲ့ files တွေကြည့်ကြည့်ဖို့ dir ဆိုတဲ့ command ရိုက်လိုက်ရင် file listing ကို ပြပေးမှာပါ။ အဲသည်မှာ .img နဲ့ဆုံးပြီးရှိနေတာကတော့ twrp image file ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်လေးမှတ်ထားပေါ့။ အစလေးလုံးလောက်မှတ်ထားလိုက်ရင်ကိုပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ အသုံးပြုဖို့ ရိုက်တဲ့အခါ အစအဆုံး အကုန်ရိုက်စရာမလိုပါဘူး။ အောက်ကပုံလေးကိုပဲ နမူနာကြည့်ပေါ့။ dir နဲ့ files တွေကြည့်တယ်။ TWRP file က twrp_v321 စသည်ဖြင့်နဲ့စတယ် မှတ်ထားလိုက်တယ်။ TWRP ထဲ boot ဖို့ ရိုက်တဲ့ command ကတော့ fastboot boot <twrp filename> ဖြစ်ပါတယ်။ <twrp filename> နေရာမှာတော့ ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ TWRP image file နာမည်အပြည့်အစုံပေါ့။ ပုံပါအတိုင်းဆိုရင် fastboot boot လို့ရိုက်.. space တစ်ချက်ခြား…. twrp filename ရဲ့ အစလေးငါးလုံးလောက်မှန်အောင်ရိုက်ပြီး TAB Key နှိပ်လိုက်ရင် twrp image filename အပြည့်အစုံ သူ့ဟာသူပေါ်လာပါမယ်။ img file တွေများနေပြီး အစလေးတွေ နာမည်တူနေတာလေးတွေရှိရင် TAB Key သာ တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက် နှိပ်သွားပါ။ filename ပြောင်းပြောင်းပြပါလိမ့်မယ်။ မှန်ရင် Enter key နှိပ်လိုက်ရုံပါ။ OKAY, Finished message line လေးတွေ တက်သွားပြီး Command Prompt ပြန်ပေါ်လာရင် ကိုယ်ရိုက်တာ မှန်ပြီယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းက 15 seconds ကနေ 1 minute လောက်အတွင်းမှာ TWRP Recovery Mode ထဲရောက်ပြီး ပေါ်လာမှာပါ။ TWRP ပေါ်မူတည်လို့ တက်လာတာ ကြာချိန်လေးတွေ ကွာတတ်ပါတယ်။
TWRP Welcome screen ပေါ်လာရင် မျှားလေးကို ညာဖက်ဆွဲပေးလိုက်ခြင်းဟာ System ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ပြုပြင်ခြင်းအတွက် zip တွေ flash ဖို့ လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲလိုလုပ်လိုက်ရင် TWRP က သူ့ထဲဝင်တိုင်း System Partition ကို Mount လုပ်ပါတယ်။ မိမိက ဥပမာ Myanmar font zip တွေ flash တာ လုပ်မယ်။ Xposed Framework zip တွေ flash တာ လုပ်မယ်ဆို သည်နေရာ Swipe လုပ်ပေးရမှာပါပဲ။ Read Only ခလုပ်လေးနှိပ်ပြီး ဝင်ခဲ့မိလို့ နောင် အခါ system partition မှာပြင်တဲ့ zip တွေ flash မရပါ Unable to mount /system ဆိုတာမျိုး error တွေပြနေရင် TWRP ထဲက Mount ဆိုတဲ့ခလုပ်နှိပ်ပြီး အဲသည်မှာပေါ်လာတာတွေထဲက Mount system partition read-only ဆိုတာရှေ့က အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်လိုက်ရင် TWRP Welcome Screen ဆီကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။ အဲသည်အခါမှ မျှားလေး ညာဖက်ဆွဲ (Swipe) လုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် TWRP ကို system partition အား mount လုပ်ထားပါလို့ ညွှန်ကြားပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေ ပေါ်လဲဆိုတာ အောက်ကပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ Read Only ထားဝင်ခဲ့မလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာ Modification တွေလုပ်ဖို့ Swipe လုပ်ဝင်မလဲကတော့ မိမိ ကလိချင်တဲ့အပိုင်းနဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ချင်တာတွေကို zip flash တာတွေပဲ လုပ်ပြီးသုံးတတ်တယ်။ Custom rom တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တင်သုံးတာလုပ်ချင်တယ်။ အဲလိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ TWRP ကို အသေသွင်းထားပေးရပါပြီ။ Swipe လုပ်ပြီး Modify လုပ်ခွင့်ပေးထားရမှာပါ။ မိမိက TWRP ကို အသေသွင်းမထားပဲ Magisk root လောက်ပဲ Flash ပြီး ကျန်မိမိလုပ်ချင်တာမှန်သမျှ Magisk module တွေကနေပဲ တစ်ဆင့် အကုန်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုး၊ Custom rom တွေ တင်မသုံးဘူး၊ OTA Update တွေလာလဲ Magisk နဲ့ယှဉ်တွဲအသုံးချပြီး OTA update size အသေးလေးတွေပဲ ဆက်လုပ်သွားမယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့ Magisk root, Magic modules တွေ အသုံးချပြီး Official rom ကို ဆက်ဆက်သုံးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးအတွက်တော့ Read Only နှိပ်ဝင်ပြီး ကျန်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအတွက် TWRP အသေရှိမှဖြစ်မှာဆိုတာမျိုးအတွက်ကတော့ Swipe ပါပဲ။ အခုပြောနေတာက ခဏ twrp ထဲကို boot ပြီး စမ်းတာလေးတွေလုပ်မှာဖြစ်လို့ စမ်းသပ်ဝင်ကြည့်ရုံတွေအဆင့်အတွက် Read Only နှိပ်ဝင်လုပ်တာ ကိုယ်သိချင်တာ အကုန်စမ်းကြည့်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဖုန်းမှာ TWRP ကို အသေသွင်းထားလိုက်တာပါ။ အထက်မှာပြောခဲ့သလို ခဏ boot ကြည့်လို့ ကိုယ်လိုချင်သလို အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဖုန်းမှာ အသေသွင်းတဲ့ command ပါ။ အမှန်ကတော့ twrp image file ကို ဖုန်းထဲ သို့မဟုတ် SD Card ထဲ သို့မဟုတ် OTG Stick ထဲကူးထား၊ အထက်မှာပြောခဲ့သလို ခဏ boot တက်စမ်း။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် မိမိခုနသိမ်းထားတဲ့နေရာတွေဆီက (တစ်ခုခုကနေပေါ့) ရှိနေတဲ့ twrp image file ကို လက်ရှိ ခဏ boot တက်ဝင်နေတဲ့ twrp ထဲကနေပဲ အသေသွင်း flash တာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ( ARB ပါနေပြီဖြစ်တဲ့ MIUI version ကိုတင်ထားမိတဲ့ ဖုန်း model တွေမှာ အဲလိုနည်းကိုသုံးပြီး တင်ပေးရပါတယ်)။ နောက်ပိုင်း အသေးစိတ် ဆက်ရေးသွားပါမယ်။ အခုက ဘယ်လို command ရိုက်ထည့်လဲ သိရင် လုံလောက်ပါပြီ။ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို ဖုန်းကို Fastboot Mode ဝင်၊ ကွန်ပျူတာမှာ USB Cable နဲ့ချိတ်၊ Command Windows ခေါ်၊ ရိုက်ရမယ့် command ကတော့ fastboot flash recovery <twrp image filename> ပါ။
fastboot flash ကတော့ မိမိက ဖုန်းထဲမှာ image file တစ်ခုကို ရေးပေးပါလို့ ညွှန်ကြားတာပါ။
recovery ကတော့ image file တစ်ခုကို သွင်း (flash) ခိုင်းတာဖြစ်လို့ ဘယ် partition အပိုင်းမှာသွင်းပေးပါလို့ ညွှန်ကြားတာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ image file အမျိုးအစားတိုင်း သူ့သက်ဆိုင်ရာ partition မှာပဲ သွင်းလို့ရပါတယ်။ partition မှားသွင်းမိရင် ဖုန်း brick ဖြစ်ပြိး ဘာမှမတက်လာတော့တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
<twrp image filename> နေရာမှာတော့ မိမိဒေါင်းထားတဲ့ twrp filename အပြည့်အစုံပေါ့။ filename ကို သည်နှစ်ခုနဲ့ < > အဖွင့်အပိတ်ထည့်ပေးစရာမလိုပါ။ ဖိုင်နာမည်ပဲ မှန်အောင်ထည့်ပေးရုံပါ။
ကဲ… TWRP သဘာဝတွေ ဆက်ပြောမယ်ဗျာ…. 😀
TWRP ထဲကို ဝင်တာနဲ့ password ဆိုတာမျိုးတောင်းပြီဆိုရင်တော့ Encrypted Data Partition ကို TWRP ကမဖတ်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါပြီ။ သည်နေရာမှာ TWRP တွေ သွင်းတာလုပ်တော့မယ်ဆို မိမိဖုန်းရဲ့ Lock Screen Password ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း PIN လောက်ပေါ့။ Number တွေပဲ ထားထားပါ။ ပြီးမှ TWRP ကိစ္စတွေ လုပ်ပါ။ စဝင်ဝင်ချင်း Password တောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ အဲသည် Lock Screen Password အနေနဲ့ ထားထားတဲ့ PIN No ကိုထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် Keyboard ရဲ့ ညာဖက်အောက်ထောင့်က အမှန်ခြစ် Key လေးနှိပ်ပါ။ ရတယ်ဆိုရင် TWRP Home Screen ခလုပ်တွေ ပေါ်လာပါပြီ။ မရပဲ password failed ပြနေရင်တော့ Cancel နှိပ်ပေးဖို့ပဲရှိပါတယ်။ သို့တည်းမဟုတ် ဘာ Lock Screen Password, Pattern, PIN, Finger Print …စတာတွေ တစ်ခုမှမထားပဲ try ကြည့်ပါ။ Password ပဲတောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ TWRP ချိန်း or Format Data ပါပဲ။ အဲလိုဆိုရင်တော့ Internal Storage ထဲရှိနေတဲ့ file တွေကို twrp ကမြင်နိုင်ဖို့ Format Data လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါပြီ။ အဲလိုလုပ်ရင် မိမိ ဖုန်းထဲက Data, Apps တွေပျက်ပါပြီ။ အဲသည်အတွက် လိုအပ်တာတွေ ကူးတာပြင်ဆင်ပြီးမှ TWRP ထည့်သွင်းထားတဲ့အလုပ်ကို လုပ်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါပြီ။
ခုလို password တောင်းတာပြနေတဲ့ screen ဘယ်ဖက်အပေါ်မှာ Mount, Decrypt Data လို့ ရေးထားတာတွေ့မှာပါ။ ဒါသည် Data Partition ကို Mount လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာပါ။ အဲဒါလုပ်နိုင်မှ Internal Storage ထဲရှိ ဖိုင်တွေမြင်ရမယ်။ TWRP ထဲက backup တွေသိမ်းချင်တာ၊ Restore လုပ်ချင်တာမျိုးတွေကို ဖတ်နိုင် မြင်နိုင်မှာပါ။ အဲသည် Decrypt မလုပ်နိုင်ရင်တော့ Internal Storage နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ TWRP ထဲကနေ Format Data လုပ်ပေးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Fastboot mode ကနေ fastboot format userdata ဆိုတဲ့ command ရိုက်ပေးခြင်းပါပဲ။ အဲလိုဆို Encryption ပျက်ပါပြီ။ TWRP ကလည်း Internal Storage ကို Read/Write တွေ လုပ်နိုင်ပါပြီ။ SD card, OTG Stick လိုတွေမျိုးကိုတော့ ဘာမှ Decrypt မလုပ်ပဲ Access လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သည်တော့ TWRP ကြီးတော့ သွင်းပြီးပြီ။ ပြန် reboot လုပ်ချိန် boot မလည်အောင် Magisk root zip, Lazy Flasher zip စတာတွေ flash ပြီးမှ reboot ရတော့မယ့်အခါတွေမှာ အဲသည် zip တွေကို SD, OTG တွေထဲ ထည့်ထားပေးပြီး အဲသည်တွေမှာ ရှာပြီး flash ခိုင်းတာ လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် TWRP သွင်းပြီး အောင်မြင်စွာ boot တက်နိုင်မှာပါ။
သည်တော့ မိမိ Data တွေမပျက်ချင်ရင် TWRP ထဲဝင်တာနဲ့ Data Partition ကို Auto Mount လုပ်ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့ TWRP တွေကိုသုံးပါ။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အဲသည် Encrypt ကိစ္စက Android6မှာကတည်းကစလာတာဖြစ်လို့ အခုလို Android9လောက်သုံးနေချိန်မှာ TWRP latest version ဆိုတာတိုင်းလိုလိုကလည်း Format Data မလို Storage ကို ဖတ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
နောက်တစ်ခုက TWRP သွင်းပြီး Boot logo မရပ်အောင် DM-Verify ကို OFF ပေးနိုင်တဲ့ Magisk zip, Lazy Flasher zip, no-verify no-encrypt zip လို့ နာမည်လေးတွေ ပေးထားတတ်တဲ့ Zip ကိုလဲ Flash ပေးဖို့ မမေ့ရပါဘူး။ အဲသည် DM-Verify ကလည်း Android 5.1.1 ကတည်းက စလာတာပါ။ သည်တော့ TWRP ကြီးလည်း သွင်းလိုက်ပြီ။ Boot မလည်အောင် ခုန zip တွေ flash ဖို့ Internal ထဲကူးထားတာတွေကလည်း Encrypt Data ကြောင့် မမြင်ရဆိုရင် SD Card, OTG တွေထဲမှာ ထည့်ပြီး flash ခိုင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါ။
DM-Verify ကို အကြမ်းပြောရရင်တော့ ဖုန်းထဲက ဘယ် partition ကိုမှ modify လုပ်တာလက်မခံတာပါ။ TWRP သွင်းတယ်ဆိုတာ recovery partition မှာ original recovery အစား အခြား image file တစ်ခုထည့်လိုက်တာပါ။ အဲလိုလုပ်ရင် Kernel ဖြစ်တဲ့ (ဖိုင်အနေနဲ့ပြောရင် boot.img) က boot တက်ဖို့ငြင်းဆန်ပြီး ရပ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် ခုနပြောတဲ့ Magisk, Lazy Flasher လိုတွေ flash ပေးလိုက်တာဟာ boot.img ကို normal boot တက်အောင် patch လုပ် ပြုပြင်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကလဲ normal boot တက်သွားပါတယ်။
TWRP ထဲမှာ Install (Flash) နိုင်တာတွေကတော့ Zip file တွေရယ်၊ Image files (.img file) တွေရယ်ပါပဲ။ Zip file တွေ flash တာကတော့ System partition ထဲမှာ Data partition ထဲမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ သုံးချင်တဲ့ apk files, lib files စတာတွေကို သွားထား၊ လိုအပ်တဲ့ permission တွေ အလိုလိုပေး.. စသည်ဖြင့်တွေကို updater script ထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ adb commands တွေရေးပေးညွှန်ကြားထား၊ files တွေထည့်ထားတဲ့ zip တွေကို သွင်းတာပါ။ Image တွေ flash တာကတော့ recovery, boot, cust, persist, system စတဲ့ partition တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ img file တွေသွင်းတာပါ။ TWRP တိုင်းလိုလိုကတော့ recovery, boot, system image တွေလောက်တော့သွင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ recovery image ဘယ်အချိန်သွင်းမလဲ.. လက်ရှိသုံးနေတဲ့ twrp ထက် version မြင့်တဲ့ဟာ ဒေါင်းလို့ရထားပြီ.. feature ပိုစုံတယ်လို့ မိမိစိတ်ကကြိုက်တဲ့ twrp image တစ်ခုဒေါင်းလို့ရထားပြီ။ အဲဒါကို ကွန်ပျူတာကနေ fastboot flash မလုပ်ပဲ ဖုန်းထဲက TWRP ကနေပဲ လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမှာ လုပ်ပါတယ်။ နောက် ARB ပါတဲ့ကောင်တွေကို TWRP အသေသွင်းချင်တာမျိုးတွေမှာ…။ boot image ကို ဘယ်အချိန်မှာသွင်းမလဲ….။ တစ်ခါတလေ အချို့ MIUI, Custom rom တွေမှာ twrp ကနေ Magisk zip ကို flash လို့မရတတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာမှပြောင်းဖို့လုပ်မနေတော့ဘူး။ ROM ထဲမှာပါလာတဲ့ boot.img ကို ဖုန်းထဲက Magisk Manager app နဲ့ patch boot image လုပ်မယ်။ အဲဒါကို TWRP ကနေ boot partition မှာသွင်းပေးလိုက်မယ်။ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ rom ထဲက boot.img ကို Android Kitchen တို့လိုနဲ့ ခွဲပြီး လိုက်ကလိပြင်ထည့်လိုက်လို့ ဖုန်းက boot မတက်တော့ဘူးဆို မူရင်းကို TWRP ကနေပဲ ပြန်ထည့်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေ… စတာတွေမှာလုပ်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာ….။ system ကတော့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ လက်ရှိ MIUI 9.5 သုံးနေရာကနေ 9.6 ထွက်လာတယ်။ ကိုယ့်ဆီ fastboot rom ကြီးဒေါင်းထားလို့ အဲသည်ထဲက system.img ပဲရှိတယ်။ အဲဒါကိုပဲ twrp ကနေ version မြှင့်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမှာ လုပ်မယ်ပေါ့… 😀
cust ကိုသွင်းနိုင်လို့ သွင်းတာမျိုးကတော့ ဥပမာ TWRP ကနေ Global rom တွေတင်ရင် Cust ပိုင်းမပါလို့ Region နေရာ China တစ်ခုထဲဖြစ်ပြီး Themes တွေဒေါင်းတာမျိုး.. Font ကိစ္စတွေမှာ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေမှာ Fix ပေးတာပေါ့။ ကိုယ့်ဆီမှာ fastboot rom ထဲက cust.img file ရှိနေရင် ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့။ ကွန်ပျူတာရှိနေရင်တော့ TWRP ထည့်ပြီးသား BLU ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေပြီမို့ fastboot flash cust cust.img ဆိုတဲ့ command ရိုက်လုပ်ပေးလိုက်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။ 😀 😀 persist ကတော့ sensor info တွေမကောင်းတော့လို့ sensor တွေ fix ချင်တာမျိုးမှာ ထည့်ပေးတာမျိုးပါ။ သည် image တွေကို TWRP တိုင်းက သွင်းမပေးနိုင်ပါဘူး Team Win ကထုတ်တဲ့ official TWRP တွေမှာ ရတာ သိပ်မတွေ့ပါ။ အဲဒါတွေကို MOD ထပ်လုပ်ထားတဲ့ အခြား ဝါသနာပါသူ Fun တွေ လုပ်ပေးထားတဲ့ TWRP မျိုးတွေမှာတော့ ပါလာတတ်ပါတယ်။ သူ့ ဝါသနာအရ သူကိုင်တဲ့ဖုန်းလောက်အတွက်ပဲ လုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်လို့ ဖုန်းပေါင်းစုံအတွက်ဆိုတာမျိုး ရှိချင်မှ ရှိမှာပေါ့ ခင်ဗျာ….။
တစ်ခုခု Install လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ TWRP ထဲဝင်.. Install ဆိုတာနှိပ်….။ Internal Storage ထဲက Zip files တွေကိုပြပေးတာ TWRP Default သဘာဝပါပဲ…။ မိမိ flash ချင်တဲ့ zip ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ Flash ဖို့လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ကျနော် flash ချင်တဲ့ဟာတွေက SD ထဲမှာ .. OTG ထဲမှာဗျ..အဲသည်ထဲကဟာတွေ ရွေးမယ်ဆိုရင်ကော.. ဟုတ်ကဲ့.. သည်လို Install Source ကို ချိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့် နမူနာပုံလေးမှာတော့ SD Card, OTG တွေ တပ်မထား ထည့်မထားလို့0MB တွေ ပြနေခြင်းပါ.. 😀
ကိုယ့်ဖိုင်တွေ ရှိမယ့်နေရာကိုတော့ချိန်းတတ်ပြီ။ ကျနော်လုပ်ချင်တာက Zip မဟုတ်ဘူး.. Img တွေ ထည့်ချင်တာဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းလေး ချိန်းပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ Storage ထဲက Zip တွေပြနေတာပျောက်ပြီး img files တွေ ပေါ်လာပါမယ်။ Zip flash ဖို့ပြနေရာကနေ Img ကိုပြောင်းမယ်။ Img ပြနေရာကနေ Zip ကိုပြောင်းမယ်ဆို အဲသည် Install Zip, Install Image ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေးကိုပဲ Toggle အနေနဲ့နှိပ်ချိန်းနိုင်ပါတယ်။
Zip file ကို Flash ဖို့ရွေးရင် အောက်ကလို ပေါ်လာပါမယ်။ အစိမ်းဝိုင်းထားတာထဲက အမှန်ခြစ်လေးနှစ်ခုရွေးစရာရယ် မလိုလှပါ။ Zip signature verification ဆိုတာ twrp ကနေ flash ဖို့ လုပ်ပေးထားတဲ့ Zip တွေ rom တွေမှာ ပါလေ့ပါထမရှိပါ။ ရွေးထားပြီး Flash ရင် Signature verification failed ဆိုပြီး error ပြလို့ ဘာမှ မ flash ပဲ ပြီးသွားမှာပါ။ အောက်တစ်ခုကတော့ Zip file ကို Flash ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းကို auto reboot လုပ်တာပါ။ ဒါလဲမရွေးတာက ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘယ် zip ပြီး ဘယ်ဟာလုပ်ရမယ်… စသည်ဖြင့် ကိုယ်လုပ်ချင်တာပေါ် မူတည်ပြီး သူ့အဆင့်အတိုင်းသွားရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ သည်တော့ Zip flash ပြီးတာနဲ့ Reboot တာမျိုးမလုပ်ပဲ အခြားလိုအပ်တာလုပ်.. အားလုံးပြီးမှ Reboot .. စသည်ဖြင့်ပေါ့ခင်ဗျာ.. အချို့တွေ ညွှန်ကြားချက်မှာပါသလို Zip ကို Flash.. Delvik Cache ကို Clear လုပ်.. ပြီးမှ Reboot ဆိုပြီး ညွှန်ကြားထားတာ လုပ်ပေးရတာမျိုးတွေရှိတော့ ခုနေရာရွေးထားရင် တစ်ခါတည်း reboot သွားပါက လုပ်စရာ အဆင့်ကျန်သွားပြီး ကိုယ်လိုသလို ဖြစ်မလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာပေါ့။ သည်တော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေသိတယ်. အားလုံး ပြီးမှ မိမိဖာသာ Reboot မယ်ပေါ့.. အဲလိုသဘောထားပြီး Box ရွေးထားတာမျိုး လုပ်မနေနဲ့ပေါ့…။
အောက်က Add more Zips ခလုပ်ကတော့ လက်ရှိ အစိမ်းဝိုင်းထားတာမှာ ပြထားတာအပြင် အခြားသော Zip တွေပါ တစ်ခုပြီးတစ်ခု Flash ချင်တာရှိပါက နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်စရာ zip files တွေ ပေါ်လာရင် ဆက်ဆက်ထည့်ပြီး Flash ခိုင်းတာပါ။ ကျနော်ကတော့ တစ်ခုကို flash လုပ်.. Error ပြလား.. Success ပြလား.. ဘယ်လိုတွေ msg တွေပြသွားသလဲ .. တစ်ခုချင်း သေချာလိုက်ကြည့်ပြီး နောက်လုပ်စရာရှိရင် နောက်တစ်ခုကို flash ဆိုတာမျိုးပဲလုပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်တာကို တစ်ခုချင်း လိုက်ဖတ်ကြည့်ထားမှ ဘာကြောင့် Error ဖြစ်နိုင်တယ်..။ ဘယ်အဆင့်တွေ ဘယ်လို pass ပြီး success ဖြစ်သွားတယ်..စသည်ဖြင့် idea ရမှာပါ။ ဒါထည့်ဆိုလို့ ထည့်လိုက်တာပဲ.. ဘယ်အခြေမှာ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဖြစ်သွားမှန်းတော့ မသိဘူးဆိုတာမျိုးတွေ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ.. ။ Clear Zip Queue ကတော့ ခုနလို Zips တွေ အများကြီးထည့်ပြီး မလိုတာတွေ ပါလို့.. ထည့်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေမှားလို့ ပြန် clear လုပ်ပြီး အစကပြန်လုပ်ဖို့အတွက် ရှင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. Ready ပြီဆိုရင်တော့ အေက်က မျှားပြာလေးကို ညာဖက်ဆွဲလို့ Swipe … Message လေးတွေ ပေါ်လာတာလိုက်ဖတ်.. Error ဖြစ်လား.. Success လား.. ဘယ် partition အပိုင်းတွေမှာ ဘာတွေလုပ်ပေးတာလဲ.. စသည်ဖြင့်ပေါ့ခင်ဗျာ.. ပြသွားတဲ့ message စာကြောင်းလေးတွေ လိုက်ဖတ်ပြီး မိမိလုပ်တာကို မိမိလေ့လာပေါ့ခင်ဗျာ…။
Image file ကို ကြတော့ ဘယ်လို Flash မလဲ.?? TWRP တွေက အနည်းဆုံး Boot, Recovery, System img တွေလောက်ကို flash ပေးနိုင်ပါတယ်။ Cust, Persist, Modem .. စတာတွေပါ flash ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိလို့ ထည့်သုံးထားရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကတော့ အောက်ပါပုံလေးအတိုင်းပါပဲ…။ Install ဆိုတာနှိပ်တယ်။ Default က Zip Flash mode ဖြစ်လို့ Install Image ဆိုတာနှိပ်ပြီး Image file flash မှာပါရွေးပေးတယ်။ ကိုယ် flash ချင်တဲ့ img file ကိုပေါ်လာတဲ့ထဲကရွေးမယ်။ ကိုယ့် file က SD Card or OTG Device တွေလိုထဲမှာဆို Select Storage ကိုနှိပ်ပြီး Location ပြောင်းပေးပေါ့။ TWRP က သူ flash ပေးနိုင်တဲ့ Partitions တွေမေးပါတယ်။ ဘယ်မှာ flash မလဲပေါ့။ အခုနမူနာက လက်ရှိ TWRP ကနေ အခြား TWRP တစ်ခုဆီပြောင်းဖို့ အဲသည် TWRP img အသစ်ကိုထည့်မှာဖြစ်လို့.. TWRP ဆိုတော့ Recovery Partition ပေါ့.. အဲဒါကိုရွေးပြီး Swipe လုပ်ပေးတာပါပဲ။ Magisk ကို Zip Flash နဲ့မရလို့ မိမိဖာသာ boot patch img လုပ်ပြီး ထည့်မယ်ဆို အဲသည်လုပ်ထားတဲ့ img file လေးကိုရွေးပြီး Boot ဆိုတာ ရွေးပေးရမယ်ပေါ့။ အခြားသော partition များကို flash ပေးနိုင်တဲ့ TWRP ဆိုလဲ သက်ဆိုင်ရာ img file နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ partition ကိုလဲ မှန်အောင် တွဲရွေးပေးရမှာပေါ့။ ဒါဆို img file flash တာတွေ အဆင်ပြေပါပြီ။
Official ROM ကနေ Custom rom ပြောင်းတင်ချင်လို့..။ China rom ကနေ Global rom ပြောင်း flash ချင်လို့.. သုံးနေတဲ့ rom ရဲ့ Version အမြင့်ကနေ အနိမ့်ပြန်ဆင်းတင်ချင်လို့… စတာမျိုးတွေ မေးလာရင် လက်ရှိတင်ထားတာနဲ့ ပြောင်းချင်တာ အမျိုးအစားမှမတူတာ.. အမျိုးအစားတူသော်လဲ version က အမြင့်ကနေ အနိမ့်ဆင်းတာ.. အဲလိုတွေလုပ်ဖို့ဆို TWRP ထဲမှာ Full Wipe လုပ်လိုက်.. ပြီးမှ တင်ချင်တဲ့ rom zip flash လိုက်.. စသည်ဖြင့် ပြောြကြပါတယ်။ TWRP သွင်းပြီးပြီ။ Internal Storage ထဲက file တွေ မမြင်လို့… အော်.. အဲဒါဆို TWRP ထဲမှာ Format Data လုပ်လိုက်.. စတာတွေလဲ ပြောကြတာပါပဲ…။ မိမိဖုန်းမှာ TWRP ထည့်လို့ ထည့်ထားမှန်းမသိ..၊ Factory Reset ချဖို့ Settings ထဲက ဝင်လုပ်တာ သည်ပုံကြီးပေါ်လာတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ ဆိုပြီး TWRP Home Screen ကြီးပြပြီးမေးတာတွေမှာ .. အဲသည် TWRP ထဲမှာပဲ Factory Reset ချလိုက်လေလို့ ပြောကြပါတယ်။ အထက်ပါအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက် TWRP Home Screen ကနေ Wipe ကိုနှိပ်.. နောက်ဆင့်ပေါ်လာတာမှာ လုပ်နိုင်တာ သုံးခုကိုတွေ့ရပါမယ်။
Wipe ကိုနှိပ်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်ပေါ်လာတာမှာ အောက်ဆုံးက မျှားပြာလေးကို ဘယ်မှညာသို့ဆွဲပေး (Swipe လုပ်) ပေးလိုက်ခြင်းဟာ TWRP ထဲကနေ Factory Reset ချတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ သိတဲ့အတိုင်း မိမိထည့်ထားတဲ့ app, data တွေ ပျက်မယ်ပေါ့။
ဒုတိယတစ်ခု Format Data ကတော့ TWRP သွင်းပြီးပေမယ့် Internal Storage ကို မမြင်ဘူးဆိုတာတွေမှာ လုပ်ပေးတာပါပဲ။ Factory Reset ချသလိုပါပဲ။ သူကတစ်ခုပိုတာကတော့ Data partition ကို Encryption လုပ်ထားတာကိုပါ ဖျက်ပေးလိုက်တာပါ။ သည်တော့ TWRP က Internal Storage ကို မြင်သွား access ရသွားပါတယ်။ အချို့သော zip တွေကို flash တဲ့နေရာမှာ Data partition ကို files တွေသွားထားတာမျိုးတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ Storage မမြင်လဲ SD, OTG တွေထဲ zip ထည့်လုပ်တာပေါ့ဆိုရင် file တော့မြင်တယ် ဖတ်တယ်.. TWRP က Data partition ကို Decrypt မလုပ်နိုင် မ Mount နိုင်တော့ file ရေးတာတွေ မလုပ်နိုင်ရင် မိမိလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် မအောင်မြင်ဘူးပေါ့။ အဲလို flash ချင်တဲ့ zip တွေ ကိုယ်မှာလုပ်စရာရှိနေရင် Decrypt auto လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ TWRP ကို ပြောင်းမရှာ မထည့်ချင်ရင်တော့ Format Data ကတော့ လုပ်ကို လုပ်ရတော့မှာပါပဲ။ Format Data လုပ်ရင် နောက်တစ်ဆင့်မှာ Text box လေးထဲမှာ yes လို့ရိုက်ပြီး Key Board နေရာက ခလုပ် အမှန်ခြစ်အပြာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် Format Data လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ Format Data လုပ်ပြီးရင် TWRP ထဲကို Reboot ပြန်လုပ်ပါ။ ပြီးမှ မိမိ Flash ချင်တာကို flash ဖို့လုပ်ပါ။ အဲလိုဆို ကိုယ်သုံးတဲ့ TWRP တွေပေါ်မူတည်လို့ /data ကို mount မလုပ်နိုင်ဘူး။ မ flash နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ error message ပြပြီး လုပ်မရတာတွေ ကင်းဝေးစေနိုင်ပါတယ်။
ROM အမျိုးအစား မတူတာတွေ ချိန်းလို့…။ version အမြင့်ကနေ အနိမ့်ကို ပြန်တင်လို့ ဆိုတာမျိုးတွေမှာ Clean တင်ပေးဖို့အတွက် Partition တွေကို Clear လုပ်ပြီးမှ တင်ဖို့နေရာမှာ အသုံးပြုတာပါ။ Advanced Wipe ထဲဝင်ပြီးရင် အစိမ်းပြထားတာတွေထဲက Dalvik/ ART Cache, System, Data, Cache တို့ကို ရွေးပြီး အောက်က မျှားလေးကို Swipe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် partition တွေ clear လုပ်တာ အဆင်ပြေစေမှာပါ။ Internal Storage ကို မလုပ်တာကတော့ အဲသည်ထဲမှာ ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ rom ကူးထားတာရှိတယ်လေ။ သည်တော့ မလုပ်ဖူးပေါ့။ SD, OTG တွေကတော့ သည်ထဲ ဝင်လုပ်စရာရယ်မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် ထည့်မစဉ်းစားဘူးပေါ့ 😀 Wipe လုပ်ပြီးရင် TWRP ထဲကိုပဲ Reboot ပြန်လုပ်ပါ။ ပြီးမှ မိမိတင်ချင်တဲ့ ROM ကို တင်ပါ။ အဲလိုဆို partition mount မလုပ်နိုင်လို့ rom zip flash လို့မရဘူးပေါ်လာတာမျိုးတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ သည်ထဲမှာ ခုနပြောတာတွေ Clear လုပ်ပြီးရင်လဲ rom တင်ပါ။ အကုန် clear ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ ဖုန်းက logo ကနေပြန်တက်မလာတော့ဘူး ဆိုတာတွေ ကြားဖူးမှာပါ။ ဘယ်တက်တော့မလဲ.. System, Data တို့ကိုဖျက်လိုက်တော့ ဖုန်းက တက်စရာ rom မရှိတော့ဘူးလေ…။
Format Data ထဲဝင်ရင် ဆက်ပေါ်လာမှာလေးက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လို့ ထည့်ပေး နှိပ်ပေးရမှာလေးတွေပါ။
Advanced Wipe ထဲဝင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာပြီး အထက်မှာရှင်းပြထားသလိုရွေးမယ်။ TWRP ထဲ Reboot ပြန်လုပ်မယ်။ ROM တင်မယ်ဆို rom အသစ်က clean ဖြစ်စွာ တက်ပါပြီ။ အဲလိုမလုပ်ပဲ ROM တင်ချင်တယ်ဆိုလဲ တင်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ Format Data အပိုင်းကိုလုပ်။ ပြိးရင် Factory Reset ကိုထပ်လုပ်။ အဲသည်အဆင့်တွေပြီးမှ Reboot လုပ်။ အဲလိုဆိုရင်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ MIUI 9.5 ကနေ 9.6 ကို တင်မယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ Install နှိပ်.. Zip ရွေး.. Reboot ပေါ့..။ ဘာမှပျက်စရာမလိုပါ။ ဘာမှ clean ပေးစရာလဲ မလိုပါဘူး။ မိမိဖာသာ အသစ်လို clean တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တင်ပြီးမှ အထက်မှာပြောထားသလို clean တာမျိုး လုပ်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
TWRP ကနေ ROM တင်တာမျိုးတွေလဲ သည် blog ထဲမှာ TWRP Tips posts လေးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေမှာလဲ ရှင်းလင်းပြထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ရှာဖွေဖတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။
သည်အပိုင်းကတော့ TWRP ထဲကနေ ဖုန်း system ပိုင်း၊ data ပိုင်းတွေကို Backup ယူသိမ်းထားမယ်။ လိုအပ်ချိန်မှာ ပြန်ပြီး Restore လုပ်မယ်ဆိုတာကို လုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Backup ယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်အပိုင်းတွေကို Backup ယူလို့ရမယ်။ ဘယ်နေရာမှာ သိမ်းထားမယ်။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ TWRP က backup ယူထားတယ်။ နောင်တစ်ချိန် ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်ချင်ရင် ဘယ်အပိုင်းတွေကို Backup ယူထားရမယ်.. စတာလေးတွေကို အကြမ်းသိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံကတော့ နမူနာအနေနဲ့ Mi Miax မှာ ထည့်ထားတဲ့ TWRP ကနေ ဘာတွေ Backup ယူလို့ရတယ်ဆိုတာကို ပြထားပေးတာပါ။ ထည့်သုံးထားတဲ့ TWRP က Official TWRP ကို အနည်းငယ် MOD လုပ်ထားတဲ့ Dev တစ်ယောက်ရဲ့ TWRP ပါ။ သည်နေရာမှာ TWRP ကနေ Backup ယူလို့အပိုင်းတွေက TWRP ကို လုပ်ပေးသူတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Backup ယူသိမ်းထားလို့ရနိုင်မယ့် အပိုင်းတွေ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ပုံသေပြောလို့မရတတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ System, Data, Boot, Recovery စတဲ့အပိုင်းတွေကို Backup ယူထားလို့ ရတာတွေချည်းပါပဲ။
Backup ယူမယ်ဆိုပြီး Backup ခလုပ်ကိုနှိပ်၊ ကိုယ်သိမ်းထားချင်တဲ့ partitions လေးတွေကို အမှန်ခြစ်ရွေး။ မျှားလေးကို Swipe လုပ်ပေးပြီး ယူလိုက်ရင် Default သိမ်းပေးထားမယ့် Location ကတော့ ဖုန်း Internal Storage ထဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာပဲသိမ်း.. ဖုန်းကို လိုသလို Clear တွေလုပ်.. ပြီးမှပြန်ထည့်မယ်လုပ်ရင် ကိုယ် Clear လုပ်တဲ့အချိန် TWRP Backup တွေရှိနေတဲ့ Internal Storage ကိုပါ Clear တာမျိုး ဖြစ်သွားရင် Backup ယူထားတာ အလကားလို ဖြစ်သွားမှာပါ။ သည်တော့ အခြားတစ်နေရာလိုဖြစ်တဲ့ SD Card, OTG Disk စတာတွေထဲ သိမ်းထားရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ အဲသည်အတွက် အောက်နားက Select Storage ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေးနှိပ်ပြီး မိမိသိမ်းထားချင်တဲ့ Storage ကို ရွေးချယ်ပြီးမှ မိမိလိုချင်တဲ့ partition အပိုင်းလေးတွေ အမှန်ခြစ်ရွေး၊ Backup ကိုသိမ်းထား… စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Backup နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ် Option လေးတွေ Support လုပ်သေးလဲ။ ကိုယ်သိမ်းမယ့် Backup ကို နှစ်သက်ရာ နာမည်လေးပေးထားလို့ရပါတယ်။ Default ကတော့ Auto Generate ဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မိမိ Backup လုပ်တဲ့ နှစ် လ ရက် နာရီ မိနစ် စက္ကန့် တို့ကို Folder နာမည်အနေနဲ့ဆောက်ပြီး အဲသည်အောက်မှာ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ partition ရဲ့ backup file တွေရှိနေမှာပါ။ အောက်ပါပုံလေးမှာ နမူနာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သည်ဥပမာအရ Internal Storage ထဲမှာ TWRP ဆိုတဲ့ Folder တစ်ခုဆောက်ပါတယ်။ အဲသည်အောက်မှာ BACKUPS ဆိုတာဆောက်ပါတယ်။ နောက်မှာဆက်ဆောက်တဲ့ Folder က characters လေးတွေကတော့ adb devices လို့ ကွန်ပျူတာမှာ command ရိုက်စစ်ရင်ပေါ်လာတဲ့ ဖုန်းရဲ့ ADB Device ID ပါပဲ။ အဲသည်အောက်မှာမှ ကိုယ် Backup လုပ်လိုက်တဲ့ Data/Time တွေနဲ့ Folder ဆောက်.. အဲသည်အောက်မှာမှ မိမိသိမ်းထားတဲ့ partition bakcup file တွေရှိပါမယ်။ အဲဒါ TWRP Backup Folder Structure ပါပဲ။ သည်တော့ အခြားနေရာတွေ လိုက်ပြောင်း ကူးသိမ်းချင်တယ်ဆို TWRP ဆိုတဲ့ Folder ကြီးကို ကူးသိမ်းပါ။ အတွင်းပိုင်းဟာတွေ နာမည်ပြောင်းတာ သိပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့။ ဖျက်ချင်ရင် နောက်ဆုံး Folder ဖြစ်တဲ့ Date/Time Folder name တွေကို ကြည့်ပြီး မလိုတဲ့ Backup ကိုဖျက်တယ်ဆိုတာ လုပ်လိုက်ပါ။ အဲလိုဆို သူ့ Structure မပျက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။ နောင် Restore ပြန်လုပ်ဖို့ Backup တွေမပေါ်ဘူးဆိုတာမျိုး ကင်းဝေးစေပါတယ်။ သူ့ Folder Sturcture အမှန်ရှိနေရင် Restore ဖို့မှာလဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ်လာမှာပါ။ ထူးထွေပြောင်းပေးနေစရာလဲ မရှိလှပါဘူး။ ဘယ်နေ့လောက်က လုပ်ထားတာလဲ ကြည့်လို့ရရင် အဆင်ပြေနေပါတယ်။
Backup ကိုနာမည်ပေးထားတယ်ဆိုရင် သူ့ Folder Structure မှာ နောက်ဆုံး Folder ရဲ့နာမည်ဟာ Date/Time တွေနဲ့မဟုတ်ပဲ မိမိပေးထားတဲ့ နာမည်ဖြစ်မှာပါ။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲသည်မှာ မိမိ Backup လုပ်တဲ့ Date/Time ကိုလဲ ပေါင်းထည့်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် options လေးတွေ ဆက်ပြောပေးမယ်။ အောက်ကပုံလေးကိုလဲ ကြည့်။ ဘယ်ဖက်ပုံက Enable compression ကို အမှန်ခြစ်ပေး ON ထားရင် backup file တွေ လုပ်ပြီးရင် အဲဒါတွေကို ချုံ့ပေးမယ်။ သိမ်းထားမယ့် Size သေးမယ်။ Backup လုပ်ချိန် နှစ်ဆပိုကြာမယ်။ Skip Digest generation during backup ကို ON ထားပေးရင် backup file တွေလုပ်ပြီး Checksum generate လုပ်တာကို မလုပ်ပဲကျော်ပေးလိမ့်မယ်။ Default အရ လုပ်တာဆိုတော့ အဲဒါက အခုလို ဝင်ကြည့်ချိန်မှာ မရွေးပဲ OFF နေပါတယ်။ လုပ်တော့ အဲသည်အတွက် backup time ပိုကြာမယ်။ လုပ်ထားတော့ ပြန် restore လုပ်ချိန်မှာ Checksum မှန်မှ လုပ်ပါဆိုရင် သေချာကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေကို ဖုန်းထဲ Restore လုပ်လို့ရမယ်။ သည်တော့ TWRP Default setting အရ backup တွေမှာ Checksum လုပ်ခိုင်းတာ၊ ပြန်ထည့်ချိန် Checksum စစ်ပြီး ပြန် Restore တာမျိုးလုပ်ရင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Backup ချိန်မှာ Checksum generate လုပ်ခိုင်းထား။ ပြန်ထည့်ချိန်မှာ Checksum စစ်ပြီး backup image file တွေ OK မှပြန်ထည့်… ဒါဆိုရင် ဖုန်းတက်ဖို့ app တွေ အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ဖို့ အတွက် ကောင်းပါတယ်။ အဲသည်အတွက်အချိန်လေးပေးလိုက်ပါ။ သည်တော့ ဒါကိုတော့ Skip လုပ်ဖို့ရွေးထားမနေပါနဲ့။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Backup လုပ်မယ့် location ရဲ့ free space ကို Backup မလုပ်ခင် စစ်တာပါ။ ဒါလည်းကောင်းပါတယ်။ အစကတည်းက Space မလောက်ရင် မလုပ်ဘူးပေါ့။ လုံလောက်အောင် ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့။ Backup တွေရေးနေရင်းတစ်ဝက်လောက်မှ space မလောက်ဘူးဆိုပြီး error ပြထွက်ရင် ပြန်ရှာဖျက်ရ.. အစကပြန်လုပ်ရနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ သည်တော့ သည် options သုံးခုမှ အချိန်ပိုပေးနိုင်လား.. မပေးချင်ဘူးလားပေါ်မူတည်ပြီး အပေါ်ဆုံးက Enable Compress ကို ရွေးတာ ဖြုတ်တာလုပ်ပါ။ ကျန်နှစ်ခုကတော့ ဘာမှမရွေး ဖြုတ်ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ညာဖက်ပုံလေးကတော့ Backup မှာ Encrypt လုပ်ထားပြီး Password ထည့်ထားတာပါ။ ပြန် Restore လုပ်ချိန်မှာလဲ password အမှန်ထည့်ပေးမှ Restore လို့ရပါမယ်။ အဲသည်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပါပဲ…။
Restore အပိုင်း ဆက်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာ။ TWRP backup တွေကို ဘယ်နေရာကို ဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းကူးကူး TWRP ဆိုတဲ့ Folder ကိုကနေစပြီးသာ ကူးဖို့သတိထားပေးပါ။ ကြားလည်ဖြတ်ကူးတာတွေမျိုး သိပ်မလုပ်ပါနဲ့။ Naming လေးတွေ Structure လေးတွေ နားလည်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ပါ။ အရှင်းဆုံး မှတ်ထားဖို့ကတော့ TWRP Folder ကြီးကနေကူးတာတွေလုပ်မယ်။ ဖျက်ချင်ရင် နောက်ဆုံး Date/Time ပါတဲ့ folder ကိုကြည့်ပြီး ဟောင်းတယ်တင်လို့ အဲသည် Date/Time folder လောက်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပေါ့။
Restore နှိပ်တာနဲ့ အောက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာမှာပါ။ Internal Storage ထဲက Backup တွေရှိရင် Backup lists ပေါ်လာမှာပါ။ အခြားသော SD, OTG Device ထဲရှိတယ်ဆိုရင် အောက်နားက Select Storage ကိုရွေးပေးရင် backup lists တွေ ပေါ်လာပါမယ်။ သည်နေရာမှာ Backup lists Source ကိုသာရွေးချယ်နိုင်ပြီး Folder Structure အလိုက် လိုက်ရွေးထည့်တာ လုပ်ပေးလို့မရလို့ Folder structure တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာ သိပ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ ဆိုချင်တာပါ။ ဒါမှ Storage source ပြောင်းလိုက်တိုင်း သက်ဆိုင်ရာ backup lists တွေ မှန်ကန်စွာပေါ်လာမှာပါ။ မိမိ ပြန်ထည့်ချင်တာ Backup ထဲနှိပ်ဝင်လိုက်ပါက အဲသည်ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ partitions တွေအကုန်ပေါ်လာပါမယ်။ ကျနော်နမူနာပြတာက partition တစ်ခုထည်းမို့ EFS partition တစ်ခုထဲ ပေါ်နေတာပါ။ အကုန်ပြန်ထည့်ချင်တာဖြစ်စေ… တစ်ခုနှစ်ခု ရွေးချယ်ထည့်တာဖြစ်စေ အမှန်ခြစ်လေးတွေ ဖြုတ် ထည့် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရွေးနိုင်ပြီး ready ဖြစ်ရင်တော့ မျှားပြာလေး ညာဖက် Swipe ရုံပါပဲ။ နောက်ဆုံးအဆင့်က Enable Digest Verification of Backup Files ဆိုတာက Backup လုပ်တုန်းက Checksum ပါလုပ်ခိုင်းတာ မှတ်မိမှာပါ။ အဲဒါလုပ်ခဲ့ရင် သည်နေရာမှာ ON ထားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် backup files တွေ အကုန်ကောင်းမှ ပြန်ရေးပေးတယ်ဆိုတာလုပ်ပေးမှာပါ။ ကိုယ်လိုသလိုဖြစ်ဖို့ ပိုမို safe ဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ Delete Backup ခလုပ်ကတော့ အခုဝင်ထားတဲ့ backup ကို မကြိုက်ရင် ဖျက်လိုက်တာပါ။ မိမိဖာသာ File Manager တွေထဲကနေ TWRP backup folder ထဲက နောက်ဆုံး Folder ကို manual ဖျက်တာနဲ့ တူတူပါပဲ။
သည်လောက်ဆို TWRP ကနေ backup လုပ်မယ်။ ပြန်ထည့်တာ restore လုပ်မယ်ဆိုတာတွေ သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။
လက်ရှိတင်ထားတာ MIUI Pro ဆိုပါတော့..။ ကိုယ်က Lineage rom တင်စမ်းကြည့်ချင်တယ်။ မကြိုက်ရင် Backup ကို Restore ပြီး ပြန်ထည့်တာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်မထားလဲ….။ ပုံမှန် procedure ကိုပြောရရင်တော့ မိမိ Backup လုပ်မယ့် MIUI Pro မှာ Lock screen password, pin, pattern, finger print တွေရှိရင် ဖျက်ထားပါ။ မဖျက်ပဲ backup လုပ်ထားပြီး ပြန်ထည့်ရင် ဖုန်းတက်လာချိန် အဲဒါတွေ မှားတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ TWRP File Manager ထဲမှာ gesture key, password key, pattern key files တွေ ဖျက်ပေးပြီးမှ ပွင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေလိုက်ရှာဖျက်တာ မလုပ်ချင်ရင် အစကတည်းက backup မယူခင် အဲဒါတွေဖြုတ်ထားပါ။ ပြီးရင် TWRP ထဲမှာ System, Data, Boot တို့ကို Backup ယူထားရင် ပြန်ထည့်တဲ့အချိန် ဖုန်း normal ပြန်တက်လာဖို့ အဆင်ပြေပါပြီ။ ပြီးရင် Lineage ကိုတင်.. စမ်း.. သုံး.. မကြိုက်တော့ဘူး MIUI Pro ပြန်ထည့်မယ်ဆို အထက်ပိုင်းတွေမှာ ရှင်းပြထားသလို Clean ဖြစ်အောင် အရင် TWRP ထဲမှာ Full Wipe လုပ်လိုက်ပါ။ TWRP ထဲပြန်ဝင်ပါ။ မိမိ Backup တွေရှိနေတဲ့ SD, OTG ဆီ Storage Source ကိုရွေးပေး.. ခုန partition သုံးခုကိုပြန် Restore ပေးရင် MIUI ROM ပြန်တက်လာပါမယ်။ root နဲ့ပတ်သက်တာများလုပ်ထားတာရှိရင် ပြန်လုပ်ရင် လုပ်ယူရတတ်ပါတယ်။ Data ကို Backup ယူထားတာဟာ Internal storage ထဲရှိတဲ့ မိမိ Photos, Videos, Songs စတာတွေ မပါပါ။ Apps တွေပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒါတွေကိုလဲ အခြား နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကူးယူသိမ်းထားတာလုပ်ပါ။ မိမိလုပ်နေတဲ့ဟာတွေမှာ အဲဒါတွေပါ ပျက်သွားအောင် လုပ်မိတာမျိုး လုပ်ချင်လုပ်မိနိုင်ပါတယ်။ Safe ဖြစ်အောင် ကူးထားပါ။ ဒါကတော့ rom backup ယူမယ်။ လိုရင်ပြန်ထည့်မယ်ဆိုတဲ့ Normal Procedure ပါပဲ။ rom တိုင်း TWRP တိုင်း ဖုန်း Model တိုင်း သည်လိုလုပ်တာနဲ့ သည်လို smooth ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အာမခံလို့မရပါ။ သတ်သတ်အထာလေးတွေ ရှိချင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိဖာသာ စမ်းသပ်ရင်းသာ လေ့လာမှတ်သားထားရမှာပါပဲ။
EFS လို သိမ်းထားလို့ရတယ်ဆိုရင် နောင်အခါ sim ကတ်တွေသိတယ်.. လိုင်းမတက်ဘူး.. baseband, imei တွေ unknown ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေအတွက် ပြန်ပြီး Restore ပေးရင် အဲဒါတွေကို fix နိုင်ပါတယ်။ Persist လိုကို သိမ်းထားနိုင်ရင် ကင်မရာရိုက်တာ orientation တလွဲတွေဖြစ်နေလို့.. 9008 ကနေ persist ဖျက်မိတာ ဖုန်းက reboot ဖြစ်ဖြစ်နေလို့.. စတဲ့အရာမျိုးတွေ fix ဖို့ အဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့။ ကျနော့်ပုံထဲက နမူနာအရ Modem အတွက်လောက်တော့သိပ်မလိုလှဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါက Fastboot rom ထဲမှာ NON-HLOS.bin ဆိုတာ Modem file ပါပဲ။ ဒါကို fastboot mode ကနေ fastboot flash modem NON-HLOS.bin လို့ command ရိုက် flash ပေးလိုက်ရင်လဲ ရတာပါပဲ။ persist လိုမျိုး.. EFS လို modemst1,2လိုမျိုးတွေက ကွန်ပျူတာကနေသွင်းချင်ရင် EDL ကနေပဲ လုပ်လို့ရတာပိုများတော့ လုပ်ယူရတာ နဲနဲ risk ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါတွေက BLU ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ပြန် fix ယူဖို့ လွယ်ကူစေတဲ့ အားသာချက်တွေပါပဲ.. 😀 😀
ကိုယ့်မှာ img files တွေတော့ရှိတယ်။ TWRP ကနေ Img flash ဖို့ support ပေးတဲ့ထဲမှာ မပါဘူးဆိုတာမျိုးတွေအတွက် TWRP Terminal ထဲက ဘယ်လိုလုပ်ယူရင် အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်ရေးသွားပါအုံးမယ်။ လိုအပ်ချိန်မှာ စမ်းကြည့်လို့ ရတာပေါ့။ သည် post ထဲမှာပဲရေးမှာပါ။ အောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ပါလာပါလိမ့်မယ်. 😀 😀
သည်လောက်ဆို TWRP Backup & Restore တွေကို အထာပေါက်လောက်ပါပြီ။ နောက်တစ်ခုဆီသို့ ဆက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာ…။
Mount ထဲကို ဝင်လိုက်ရင်တော့ အမှန်ခြစ်လေးတွေပြထားတာက TWRP ထဲ ဝင်လိုက်ရင် TWRP က Auto Mount ပေးထားတာတွေပါ။ အဲသည် Partition တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ လုပ်တာ၊ Zip တွေ flash ရာမှာ အဲသည် partition အပိုင်းတွေပါတာမှာ လုပ်ခွင့်ပေးတာ… စတာတွေအတွက် အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ ပုံထဲမှာ System partition ကို Read Only mount ထားတာတွေ့မှာပါ။ ဒါကကျနော့်အနေနဲ့ TWRP အသေသွင်းတာလုပ်ပဲ ခဏ ဝင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေမို့ ထားထားတာပါ။ TWRP အသေသွင်းသူ၊ Custom rom တင်ချင်သူ၊ system ပိုင်း ပြင်ဆင်တဲ့ Zip တွေ Flash ချင်သူတွေအဖို့ ဒါကို ဖြုတ်ထားရမှာပေါ့။
ပုံအရ လေ့လာကြည့်ရင် Cust ကို Mount ထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။ သည်တော့ ROM တွေတင်မယ်။ Region Fix ဆိုတာတွေ flash မယ်ဆို unable to mount /cust လို့ error ပြပြီး တင်မရတာဖြစ်နေရင် သည်နေရာမှာ အမှန်ခြစ်ပြီး Mount ပေး။ ပြီးမှ zip တွေ Flash ကြည့်ပေါ့။ ကျနော်တော့ မစမ်းဖြစ်ပါဘူး။ Region ကိစ္စတွေက Fastboot ကနေပဲ cust.img သွင်းပစ်လိုက်တာပဲများလို့ပါ။ ROM တင်လို့ အဲဒါပြလဲ ROM ထဲက updater script မှာ cust နဲ့ပတ်သက်တာ ဖျက်ပြီး လုပ်လိုက်တာတွေပဲများပါတယ်။ ကြုံကြိုက်ရင် စမ်းကြည့်ပေါ့။ အချို့ TWRP တွေက သည်နေရာမှာတော့ ပေါ်တယ်။ တကယ် Mount လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ အဲလိုတွေဆိုရင်တော့ မရဘူးပေါ့။ TWRP ထဲပါတိုင်းရမယ်လို့ အတပ်မပြောနိုင်ပါ။ Dev idea ပါပဲ။ သူက သည် function တော့ထည့်မယ်။ အခုတော့ UI လောက်ပဲ ထားထားအုံးမယ်။ တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ code မရေးရသေးဘူးဆိုလဲ ပေါ်နေပေမယ့် မရဘူးပေါ့။ အဲလိုအထာလေးတွေလဲ မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။
USB OTG Device တွေတပ်ရင် TWRP တွေက Auto Mount လုပ်ပေးတာများပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ Select Storage ဆိုတာနှိပ်ချိန်းရင် device storage ဘယ်လောက် MB ရှိတယ်တာပြပြီး အလုပ်လုပ်တာများပါတယ်။ တကယ်လို့ Auto Mount မလုပ်ရင်တော့ OTG Device ကို ဖုန်းမှာထိုးထားပြီး TWRP ထဲပြန်ဝင်ပါ။ အချို့က TWRP ဝင်နေတုန်း Plug & Play လို အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ Reboot ပြီးမှ Mount မလုပ်သေးရင် ပုံထဲမှာပါတဲ့ Mount USB Storage ကိုနှိပ်ကြည့်ပါ။ USB OTG နေရာ auto အမှန်ခြစ်ဖြစ်သွားရမှာပါ။ Select Storage ကို နှိပ်ကြည့်ရင် USB OTG နေရာ0MB မဟုတ်ပဲ storage size ပြနေရပါမယ်။ အဲဒါတွေမှမရရင်တော့ TWRP က UI ပါသော်လဲ Support မလုပ်တာ.. မိမိ OTG Device မကောင်းတာ.. အဲသည်မှာ Format လုပ်ထားတဲ့ File System ကို TWRP က Support မလုပ်တာလို့ ယူဆနိုင်ပြီး အဲဒါတွေပြေလည်အောင် Fix ပေးဖို့ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ TWRP ကမှ Support လုပ်မပေးတာတော့ မတတ်နိုင်ပါ။ TWRP ပြောင်းရုံပဲရှိပါမယ်။
Disable MTP လို့ပေါ်နေတဲ့ ခလုပ်လေးကတော့ အခုအချိန်မှာ Media Transfer Protocol ကို Enable လုပ်ထားလို့ပေါ်တာပါ။ Disable လုပ်ချင်ရင် ဒါကိုနှိပ်ပါပေါ့။ အဲလိုနှိပ်လိုက်ရင် Enable MTP လို့ပေါ်မှာပါ။ MTP ကို Enable/Disable လုပ်တဲ့ Toggle Button ဖြစ်ပါတယ်။ Enable လုပ်ထားရင် ( TWRP ထဲမှာ Disable MTP လို့ပေါ်မယ်) Internal storage နဲ့ USB OTG လိုကြား၊ TWRP ဝင်ထားပြီး ကွန်ပျူတာမှာ USB Cable နဲ့ဆက်ထားပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းကြား files တွေကူးတာ စတာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားတာ file ကုူးမရဘူး။ ကွန်ပျူတာ My Computer ထဲမှာ Drive မပေါ်ဘူးဆိုတာတွေအတွက် သည်နေရာလေးစစ်ကြည့်ပါ။ Enable MTP လို့ပေါ်နေရင် off ထားလို့ပါ။ ON ပေးပြီး ကွန်ပျူတာမှာ ပြန်ချိတ်စမ်းတာ လုပ်ကြည့်ပါ။ မရရင် .. နှိပ်လဲ စာအပြောင်းအလဲ ဘာမှမရှိရင်တော့ TWRP က support မလုပ်တာပါ။ TWRP ပြောင်းတင်ရုံမှတစ်ပါး နည်းလမ်းမရှိပါဘူးပေါ့ 😀
သည်လောက်ဆိုရင်တော့ Mount နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခန်းကို ရပ်မယ်ဆို လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ….။
Settings ထဲကတော့ Official TWRP တွေမှာ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာ သိပ်မပါလှပါဘူး။ တစ်ခုက Language ချိန်းတာပါ။ TWRP ထဲစဝင်ဝင်ချင်း Welcome screen မှာ System Partition ကို Read Only ထားမှာလား.. Modification အတွက် Swipe လုပ်ပေးမလား.. ဆိုတာမေးတဲ့နေရာမှာ Select Language ဆိုတာပါပါတယ်။ တရုတ်လိုတွေဖြစ်နေတာ အခြား language တွေဖြစ်နေတာဆို အဲသည်မှာနှိပ်ရင် TWRP Settings ထဲက Language နေရာရောက်ပါတယ်။ အဲသည်မှာ English ကိုရွေးပြီး အောက်က Button ကိုနှိပ်ရင် ပြောင်းပါတယ်။ အချို့တွေက Welcome screen မပေါ်ပဲ တရုတ်စာတွေနဲ့ Home Screen တန်းရောက်ပါတယ်။ အဲလိုတွေအခါကြတော့လဲ TWRP Home က ညာဖက်ခလုပ်တွေမှာ အပေါ်ဖက်ကရေရင် သုံးခုမြောက်.. အဲဒါလေးနှိပ်.. နောက်ပေါ်တာမှာ ကမ္ဘာလုံးပုံလေးနှိပ်.. အဲသည်က English ကိုရွေး.. စသည်ဖြင့် ပြောပါတယ်။ အခုပုံပါအတိုင်းပါပဲ။
Settings -> General ထဲမှာတော့ Backup / Restore တွေအတွက် Checksum တွေ လုပ်မယ် မလုပ်ဖူး ဆိုတာတွေ ရွေးပေးချင် ပေးနိုင်အောင်ပါပါတယ်။ Zip တွေ flash ရာမှာ Verification စစ်ဖို့ လုပ်မယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာပါပါတယ်။ zip တွေမှာ ပါလေ့မရှိတော့ သည်နေရာလဲ ရွေးထားပေးဖို့ မလိုဘူးပေါ့။ OTA ကို Support လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ TWRP တွေမှာတော့ MIUI OTA ကို Enable ဖို့ ရွေးပေးထားရပါတယ်။ ဒါရွေးပြီး လက်ရှိတင်ထားတဲ့ ROM ရဲ့ same version or grater ကို တင်ပေးထားရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်ပိုင်း OTA ကို TWRP ထဲကနေ တင်နိုင်ပါပြီ။ RedWolf TWRP လိုဆိုရင်တော့ အခြားတော်တော်များများ Customization ပိုင်းတွေပါပါတယ်။ ဒါကတော့ မိမိဖာသာ တင်သုံးပြီး မှတ်သားထားပေါ့ခင်ဗျာ.. 😀
သည်အပိုင်းမှာတော့ ပုံမှာပြထားသလို File Manager, Terminal, ADB Side Load အပိုင်းလေးတွေပဲ အနည်းငယ်ပြောပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာ…။
File Manager ကိုတော့ Files တွေ Folder တွေ ဝင်ဖျက်တာ… အစားထိုးတာ .. Permissions တွေပေးတာ .. စတာအတွက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ သည်မှာတော့ နမူနာအနေနဲ့ ဖုန်းမှာထားထားတဲ့ Lock Screen Password, Pattern ကို ဝင်မရတော့လို့ဖျက်တာ… App တွေကို lock လုပ်ထားပြီး ထားထားတဲ့ pattern ကိုမသိတော့လို့.. အဲသည် App lock ကို Mi Account, Finger Print နဲ့လဲ မချိတ်ပဲ ထားမိလို့ မေ့သွားလို့ ဖျက်တာအတွက် နမူနာလုပ်တာလေး ပြပါမယ်။
App Lock တွေလုပ်ထားရင် Pattern ထားထားပေးရတာ Mi User တိုင်းသိမှာပါ။ အဲဒါလုပ်ထားရင် TWRP File Manager ထဲက /data/system/ ထဲမှာ သည် file လေးနှစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲဒါလေးကို ဖျက်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ App Lock ထဲပြန်ဝင်ရင် Pattern အသစ်တောင်းတာ ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ထည့်ပေးရုံပါ။ ဒါဆို Mi Account, Finger Print နဲ့App Lock ကို မချိတ်မိလို့ Factory Reset ချပေးရတာမျိုး ကင်းဝေးတာပေါ့ခင်ဗျာ.. BLU လုပ်ထားတာတွေရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါပဲ.. 😀 😀
Pattern, Password, PIN တွေအဖြစ်ထားထားတဲ့ Lock Screen Password အနေနဲ့ကတော့ သည် ဖိုင်လေး နှစ်ခုရှိနေပါမယ်။ အဲဒါလေးနှစ်ခု ဖျက်ရင် ရပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာ Settings နေရာပြန်ဝင်ရင် အသစ်လုပ်တဲ့ step နဲ့ပဲ ပြန်စပါမယ်။ မိမိထည့်ထားချင်တာ အသစ်ပြန်ထည့်ပေါ့။ သည်ဟာကိုလုပ်တာကလည်း TWRP ကနေ rom backup ယူချိန် အဲဒါတွေ မဖြုတ်ခဲ့ပဲ ယူမိလို့ ပြန်ထည့်ချိန် lock screen password မှန်သော်လည်း မရဖြစ်နေတာမျိုးအတွက်လဲ ဒါလေးတွေကို ရှာဖျက်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်။ အဲလိုမျိုးမှာ Pattern လိုထားခဲ့ရင် တောင်းတော့တောင်းမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မိမိကြိုက်တာ ဆွဲပေးလိုက်ရင် Lock Screen ပွင့်သွားမှာပါ။
ဒါတွေက Android Version, MIUI Version စတာတွေပေါ်မူတည်လို့ နာမည်လေးတွေ ကွဲကောင်းကွဲပါမယ်။ နောက်ဆုံးက .key လို့ပါနေတဲ့ဟာတွေကို ဖျက်မယ်ဆိုရတယ်လို့မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Android Ver နိမ့်တာတွေမှာ pattern ကို Gestures.key လို့ နာမည်ပေးထားတာမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ .key ဟာတွေ ဖျက်ရင် ရတယ်လို့ မှတ်ထားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 😀
ဒါတွေကို TWRP File Manager ကနေလုပ်ဖို့ Root file system / ကနေမှတစ်ဆင့် data , system ဆီ အဆင့်ဆင့်ဝင်သွားရပါတယ်။ TWRP File Manager ထဲစဝင်ဝင်ချင်းမှာလဲ / ထဲပဲရောက်နေမှာပါ။ data, system ဆက်သွားပေါ့။ data ကိုသွားတဲ့အခါ ဘာ Files, Folder မှ မမြင်လဲ Mount ထဲမှာ Data ကို အမှန်ခြစ် Mount ထားတာဖြစ်နေအောင် စစ်ဆေးပေးပါ။ အဲလို Mount ထားရင် လိုတာတွေ မြင်ရပါမယ်။
File ဘယ်လိုသွားရွေးဖျက်မလဲဆိုတာတော့ အောက်ပါပုံလေးအတိုင်းပါပဲ။ ပုံစာလေးတွေပါပါလို့ သည်မှာ အသေးမစိတ်တော့ပါဘူး။ File or Folder တစ်ခုကိုနှိပ်ရွေးလိုက်တာနဲ့ နောက် Screen မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေပေါ်လာမှာပါ။ Copy File, Move, Rename File ကကိုယ်ရွေးလိုက်တာကို အခြားသော location တစ်နေရာကို ကူး.. ရွှေ့.. ဒါမှမဟုတ် နာမည်ပြောင်း စတာတွေလုပ်တာပေါ့။ Folder ကိုရွေးခဲ့ရင် သည်နေရာမှာ Folder ကိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့။ chmod755, chmod ကတော့ Files, Folder ကို Permission ပေးတာပါ။ TWRP File Manager မှာ Internal Storage ကို /sdcard လို့ မြင်နေမှာပါ။ အဲသည်အောက်မှာထားတဲ့ files, folder တွေမှတစ်ပါး ကျန် location တွေထဲမှာထားရင် Folder Permission အမှန်.. File Permission အမှန်ရှိရပါတယ်။ အဲဒါမှ ဖုန်းက Normal operate လုပ်မှာပါ။ Font နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို permission ပေးတာမှားရင် ဖုန်းက UI ပေါ်မှာ မဟုတ်တော့ပါ။ အဲလိုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ Default အားဖြင့် Folder Permission က 0755 ပါ။ Files တွေအတွက်က 0644 ပါ။ အသေးစိတ်တွေ လေ့လာချင်ရင်တော့ Google ပါခင်ဗျာ… 😀 Delete ကတော့ ဖျက်ဖို့အတွက်ပေါ့…။
File Manger နဲ့ပတ်သက်လို့ သည်လောက်သိရင် မိမိကလိချင်တာ စိတ်ကူးလုပ်ကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ အေးအေးဆေးဆေး ကလိနိုင်ချိန်.. ဖုန်းမသုံးလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမှာ လုပ်ကြည့်နေရင် idea ပိုရတာပေါ့ခင်ဗျာ.. မတက်တော့ရင် ROM ပြန် flash မယ်ဆိုပြီး မိမိဖက်က လိုတာတွေ အသင့်ရှိ.. လုပ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ idea မျိုးရှိနေရင် များများကလိလို့ များများ အတွေ့အကြုံရမှာပါ… 😀 😀
ADB Side load ကိုသုံးတာကတော့ TWRP ကသွင်းပြီးပြီ။ Encrypt Data partition ကိုမဖတ်လို့ boot မလည်အောင် Internal ထဲက magisk လိုမျိုး flash လို့မရ… SD, OTG တွေမရှိရင် ကွန်ပျူတာကနေ Zip တွေ flash ပေးဖို့ လုပ်ခိုင်းတာမျိုး လုပ်ချင်ရင် သုံးတာပါ။ သည် post [ –> Magisk Root <– ] ထဲမှာ တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်နည်း ပုံတွေနဲ့ပါပါတယ်။ လိုက်ရှာဖွေဖတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ… 😀
Terminal ကို သုံးတာကတော့ ကွန်ပျူတာကနေမသုံးပဲ adb commands တွေနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကို twrp ထဲမှာပဲလုပ်တာပါ။ TWRP ထဲက Terminal ဟာ root access နဲ့ပတ်သက်တဲ့ adb commands ပါ အကုန်သုံးလို့ရပါတယ်။ TWRP ဟာ special kernel ဖြစ်လို့ သူ့ထဲမှာ root access ဟာရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သည်နေရာမှာ နမူနာလေးတစ်ခုလုပ်ပြပေးပါမယ်။ Idea လေးတစ်ခုစီ တစ်ခုစီလဲ ရသွားအောင်ပေါ့။
လုပ်မယ့် ပုံစံလေးကတော့ …
Magisk root လုပ်ချင်တယ်ဗျာ။ TWRP ကိုခဏ boot တက်ပြီး Magisk zip flash ရင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းပြန်တက်လာရင် logo ပဲရပ်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ Magisk zip flash တာမှာ error ဖြစ်တယ်။ အဲသည်တော့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ rom ရဲ့ boot.img ကိုယူပြီး ဘယ်ဖုန်းထဲမှာမဆို Magisk manager apk ထည့်ပြီး အဲသည် img နဲ့ magisk boot patch လုပ်ယူမယ်။ boot patch img ရလာရင် fastboot mode ကနေ fastboot flash boot patch_boot.img ဆိုပြီး flash ပေးမယ်။ ဒါဆို Magisk root လဲရ.. ဖုန်းလဲ normal တက်.. အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ idea ကို သိတယ် လုပ်မယ်ဆိုပါတော့….။ MIUI rom တွေမှာ Recovery rom ပဲဖြစ်ဖြစ်.. Fastboot rom ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြည်လိုက်ရင် boot.img ပါပါတယ်။ အဲဒါကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်း MIUI Ver နဲ့ rom တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့။ Custom rom တွေမှာလဲ Zip ဖြည်လိုက်ရင် အဲဒါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် boot.img လေးရဖို့ rom zip , fastboot rom တွေက မရှိဘူး..ကိုယ့်ဆီရှိတာက ဖုန်းထဲက rom ver အတွက်မဟုတ်ဘူး… စသည်ဖြင့်တွေဖြစ်နေရင် ဖုန်းထဲက boot.img ကို ထုတ်ဖို့လိုလာပါပြီ။ အဲလိုအတွက် ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် TWRP ရှိရပါမယ်။ အသေသွင်းစရာမလိုပါ။ ခဏ boot တက်မယ်… boot.img ထုတ်မယ်။ boot.img ရှိရင် Magisk Manager app နဲ့boot patch လုပ်လို့ရပါပြီ။ အဲသည်အတွက်အခုနေရာမှာ TWRP သုံးပြီး ဖုန်းထဲက boot.img ထုတ်မယ်ဆိုတာကို လုပ်ပြပါမယ်။ boot.img ရလာရင် ဘယ်လို patch boot လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ သည် post [ –> Making boot patch img <– ] ထဲမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်ဖုန်းနဲ့လုပ်လုပ် တူတူပါပဲ။ boot.img ပဲ ကိုယ်တင်မယ့်ဖုန်းနဲ့ကိုက်ဖို့ အဓိကကျတာပါ။
ဒုတိယအနေနဲ့ TWRP Terminal သုံးပြီး အဆင့် တစ် မှာရလာတဲ့ patch boot.img ကို adb command နဲ့သွင်းပေးတာပါ။ Idea ကတော့ မိမိဆီမှာ img file ရှိတယ်။ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ img က TWRP ကနေ တိုက်ရိုက် flash လို့မရဘူး။ ဥပမာ persist, cust စတာတွေပေါ့။ ကွန်ပျူတာမရှိလို့ img ပဲရှိပြီး TWRP ကနေ Terminal သုံးလို့ adb commands တွေသုံးထည့်တာကို လုပ်ပြပေးပါမယ်။ သည်လိုဆို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပုံစံလေး လုပ်ယူသွားလို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး idea လေးတွေ ရမှာပေါ့ခင်ဗျာ…။
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဖုန်းထဲက boot.img ကို ထုတ်ယူဖို့ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် TWRP ထဲကို boot တက်ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ အထက်မှာရေးပြီးသားပါ။ Computer လေးလဲ လိုအပ်တယ်နော်..။ 😀 TWRP ထဲရောက်ရင် Read Only နဲ့ပဲဝင်ထား။ Boot ကို Backup လုပ်လိုက်ပါ။
Backup ယူတဲ့အခါမှာ TWRP က Internal Storage မမြင်ရင်တော့ Select Storage ကိုနှိပ်ပြီး OTG, SD တွေထဲ ညွှန်းပေးရမှာပေါ့။
TWRP Backup Folder ထဲမှာ boot.emmc.win ဆိုတာလေးရလာပါမယ်။ အခြားဟာတွေကို ဂရုမစိုက်လဲ ရပါတယ်။ အဲဒါကပဲ boot image file ပါ။ အဲဒါကို boot.img လို့ပဲ နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ရပါပြီ။ boot.img ရှိရင် Magisk Manager app နဲ့ boot patch img လုပ်တာ MI A1 Guide ထဲကအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ရင် boot patch img ရပြီပေါ့။ လုပ်နည်းဖတ်ဖို့ အထက်မှာ link ပေးထားတယ်နော်…။ boot patch အပိုင်းလောက်ပဲ ဖတ်ပေါ့။ အဲဒါကို Internal Storage ထဲ ကူးထည့်ပါ။ ဘယ် Folder အောက်မှာမှ မထားပါနဲ့။ patch boot img က Default အနေနဲ့ Internal Storage/Download အောက်မှာ ရောက်နေမှာပါ။ ရွှေ့ပေးလိုက်ပါ။ TWRP Terminal မှာ adb command တွေရိုက်ရင် အရှည်ကြီးရိုက်နေရမှာစိုးလို့ပါ.. 😀 😀 TWRP File Manager ထဲမှာကြည့်ရင် /sdcard အောက်မှာ boot patch file လေးရှိနေရင် OK ပါပြီ။
patched_boot.img လေးရရင်တော့ TWRP ထဲကို boot တက်ပါ။ Terminal ထဲဝင်ပါ။ လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ မိမိတို့ patched_boot.img ကို boot partition ဖြစ်တဲ့ block နေရာမှာ သွင်းပေးမှာပါ။ boot file ဆိုတော့ boot နေရာပေါ့။ persist ဆို persist, cust ဆို cust နေရာပေါ့။ block number တွေ ဘယ်တူပါမလဲ။ ဘယ် partition က ဘယ် block number ဆိုတာကြည့်တာကို post အထက်ဆုံးနားမှာ adb command ရိုက်စစ်တာ ပြခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်တာပါ။ root လိုပါတယ်။ အဲဒါကို TWRP Terminal ထဲမှာ ရိုက်ပြီး လိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။ listing ရှည်ပြီး စာလုံးသေးတော့ သေချာရှာရပါမယ်။ ပြီးရင် သေချာရေးမှတ်ထားပါ။ အဲသည်မှာ0တွေဟာ Zero ပါ။ O အို မဟုတ်ပါ။ Partition names အတိုင်း အစီအစဉ်အတိုင်းပြတော့ boot ဆိုတော့bနဲ့စလို့ listing ထိပ်နားလောက်မှာ ရှိပါမယ်။ ကျနော့်ဖုန်းမှာ boot partition ရှိနေတဲ့ block သည် /dev/block/mmcblk0p60 မှာပါ။ အဲဒါလေးရေးမှတ်ထားပါ။
ပြီးရင် Terminal ကနေ သည် dd if=/sdcard/patched_boot.img of=/dev/block/mmcblk0p60 adb command ကိုရိုက်ပြီး patched_boot.img ကို boot partition ရှိတဲ့ block ဆီကို သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ဆက်ထည်း ပြိးသည်ထိရိုက်သွားပါ။ ဖုန်း screen နဲ့မဆန့်ရင် သူ့ဟာသူ အောက်ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
adb command လေးကို ဗမာလို အကြမ်းနားလည်အောင်မှတ်ရရင်တော့ if က input file အနေနဲ့ /sdcard အောက်က patched_boot.img လေးကို of ဆိုတာ output file အနေနဲ့ mmcblk0p60 မှာ သွားရေးလိုက်ပါ။ သွင်းလိုက်ပါလို့ဆိုလိုတဲ့သဘောလိုပါပဲ။ ပြီးရင် in, out နေရာမှာ number values တွေ တူတူလာပြပြီပြီး Terminal prompt # ပေါ်လာရင် OK ပါပြီ။ Reboot လုပ်လိုက်ပါ။ ပြန်တက်လာရင် Magisk Manager မှာ Magisk root installed ပြီးသား ဖြစ်ပါပြီ။
သည်လို magisk root အတွက် patched_boot.img ကို fastboot ကနေ ကွန်ပျူတာနဲ့ fastboot flash boot patched_boot.img လို့ အသေမသွင်းသေးဘူး… သို့တည်းမဟုတ် TWRP Terminal ကနေ dd command နဲ့မသွင်းသေးဘူး။ ကိုယ့်ဖုန်းတက်လာပါ့မလား။ အဆင်ပြေပါ့မလား။ Magisk root ရမှရပါ့မလား စမ်းချင်ရင် TWRP ကို ခဏ boot တက်သလိုပါပဲ.. patched_boot.img ကို ခဏ boot တက်စမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကနေ ရိုက်ပေးရမယ့် fastboot command ကတော့ fastboot boot patched_boot.img ပါပဲ။ All OK ရင်တော့ အသေသွင်းပေါ့။ Mi A1 Guide ထဲမှာလဲ စမ်းတာလုပ်ပြတာပါပါတယ်။ သည်လိုတွေစမ်းရာမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်နေလို့ သွင်းတော့လဲ fastboot ကနေသွင်းပေါ့။ dd command နဲ့လုပ်ပြတာက file ရှိပြီး ကွန်ပျူတာမရှိ၊ မိမိသွင်းချင်တဲ့ image file တွေက TWRP ကတိုက်ရိုက် Install ဆိုတာကနေမလုပ်နိုင်၊ ကွန်ပျူတာကမရှိ အခြေအနေတွေမှာ dd သုံးလုပ်တာကို ပြချင်တာပါ။ persist, cust, modem စတာတွေပေါ့။
TWRP နဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်ဆုံးကတော့ Reboot ဆိုတာနှိပ်တာပါပဲ။ အဲသည်မှာ ဘယ်ကို Reboot မှာလဲ ရွေးချယ်စရာပေါ်ပါမယ်။ System ကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း boot တက်တာပါ။ Power Off ကတော့ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းနေတာပါပဲ။ Recovery ကတော့ TWRP ထဲကို boot ပြန်လုပ်တာပါ။ ခဏ TWRP ထဲ boot တက်စမ်းရင် ဒါလုပ်မရပါ။ TWRP အသေမရှိလို့ Official Stock Recovery ပဲ ပြန်တက်ပါမယ်။ Boot Loader ကတော့ Fastboot Mode ထဲကိုသွားတာပါ။ TWRP ထဲ ခဏ boot တက်ထားတုန်းလဲ Reboot -> Boot Loader လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝင်ပါတယ်။ Recovery နဲ့ Boot Loader ကို ပြန်တက်ရာမှာ တစ်ချို့ TWRP တွေက Touch လေးတွေ လိုက်နှိပ်လုပ်ရုံနဲ့ Trigger မဖြစ်ပါ။ ပိုသေချာအောင် Recovery ကို နှိပ်ပြီးရင် နောက်ဆုံးအဆင့် ခလုပ်၊ Swipe တွေ မနှိပ်ခင် Vol Up key လေးကို ဖိထားပေးပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က လိုတာ လိုက်နှိပ် လိုက်ဆွဲလုပ်ပြီး Recover ထဲဝင်လာသည်ထိ Vol Up ကိုဖိထားပေါ့။ Boot Loader ဆိုရင်တော့ Vol Down ကို သုံးရမှာပေါ့။ ဒါဆိုရင်တော့ လိုသလို တစ်ခါတည်း ဝင်ချင်တဲ့ Mode ဆီသွားဖို့ ပိုအဆင်ပြေစေတာပေါ့ခင်ဗျာ…..။
TWRP နဲ့ပတ်သက်သော စပ်မိစပ်ရာလေးတွေ တော်တော်လေးရှည်လျားသွားပြီးမို့ အခြားဟာလေးတွေအပိုင်း အတိုအထွာလေးတွေ ဆက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာ… 😀
Magisk နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြောရရင် TWRP ကနေ magisk zip flash လို့မရရင် ဘယ်လို boot patch လုပ်မယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လို boot ပြီးစမ်းမယ်။ Fastboot , TWRP Install, TWRP Terminal ကနေ သွင်းမယ်ဆိုတာတွေ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Magisk နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ သည် blog ထဲမှာ post တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Magisk အတွက် တင်မယ်ဆိုရင် TWRP ထဲကို ခဏ boot .. အဲသည်ထဲကနေ Magisk zip flash…
Zip flash အဆင်မပြေရင် boot patch လုပ်ယူ။ TWRP သုံးပြီး လက်ရှိဖုန်းထဲက boot ထုတ်ယူတာလဲ အထက်မှာပြထားပါတယ်။
Boot patch ရလာလို့ ကွန်ပျူတာရှိရင် fastboot mode ကနေ patched_boot.img ကို ခဏ boot တက်ခိုင်းပြီး ဖုန်း တက် မတက် စမ်းလို့ရ.. စမ်းဖို့ ရိုက်ရတဲ့ command က fastboot boot patched_boot.img
patched_boot.img အသေသွင်းတော့မယ်ဆိုရင် fastboot ကနေ fastboot flash boot patched_boot.img နဲ့သွင်း…။
Computer မရှိလို့ TWRP ကနေ ခဏ boot တက်ပြီး patched_boot.img သွင်းချင်ရင် TWRP ထဲက Install -> Select Image -> patched_boot.img ကိုရွေး –> Recovery မှာကို ရွေး -> Flash….။
စတဲ့ သွင်းပုံလေးတွေကို မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Magisk & OTA
Magisk root လုပ်ထားပြီး OTA Update ရလာရင် Magisk Manager app ထဲမှာ Magisk ကို Uninstall လုပ်။ အဲသည်နေရာမှာ Restore Images ဆိုတာပဲရွေးပြီးထား။ Full Uninstall မဟုတ်…။ Success သွားရင် OTA Update ကိုတင်။ တင်ပြီးရင် Reboot မလုပ်နဲ့အုံး။ Magisk Manager app ထဲမှာ Magisk Install လုပ်။ Direct Install လုပ်မယ်ဆိုတာကိုပဲရွေး။ Mi A1, A2 တို့လို A/B Partition type နဲ့ဆို လုပ်ပုံကတော့ Mi A1 Guide2ထဲမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ သူက Update လုပ်သွားတာ another Slot မှာမို့ အဲသည်နေရာကို ရွေးပေးပါပေါ်တာ။ MIUI လို Flat partitions system တွေနဲ့ကတော့ Direct Install ပဲရွေးဖို့ပါမှာပါ။ ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ပြီးရင် Reboot လုပ်။ OTA တင်ပြီး Magisk root ပါဆက်ရ…။
Magisk ကို လုံး၀ uninstall ချင်ရင်ကတော့ Full Uninstall ကိုရွေး။ အဲဒါကလဲ အင်တာနက်ဖွင့်ထားမှပေါ်ပါမယ်။ ဖွင့်မထားရင် Restore Images ပဲပေါ်ပါတယ်။
ARB & TWRP
ARB ပါတဲ့ rom တွေမှာ၊ ဖုန်း model တွေမှာ TWRP အသေသွင်းချင်ရင် TWRP ထဲကို ခဏ boot .. ဖုန်းထဲမှာ or SD, OTG တွေမှာ twrp image ကို ကူးထားပေးပါ။ ပြီးရင် TWRP ထဲကနေ Install -> Install Image နဲ့ twrp image file ကိုရွေးပေးပြီး အသေသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ARB ပါတာတွေမှာ TWRP သွင်းမယ်။ Custom ROM သွင်းမယ်ဆိုရင် အိုကေပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Custom MIUI rom ဆို rom zip ထဲမှာ Firmware folder မပါတာကောင်းပါတယ်။ သည်တိုင်းဖျက်လို့တော့မရပါ။ ပါနေရင် ဖျက်ပြီး Updater script ထဲမှာ Firmware folder ထဲက ဟာတွေမရေးအောင် လိုသလိုတော့ပြင်ပေးရပါတယ်။ Official MIUI rom တွေပြန်တင်ချင်ရင်တော့ TWRP ကနေ flash မယ့်အစား Fastboot rom ပဲတင်ပေးပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တင်မယ့် Fastboot rom တွေဖြည်လိုက်ရင် flash_all.bat file ကို NotePad++ လို Editor နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် ထိပ်ဆုံးမှာ Anti var value ကို စစ်တာ ..၊ Set လုပ်တာ.. Flash တာ စတဲ့ command တွေပါပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်တင်မယ့်ဟာသည် ARB ပါနေပြီဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ARB ပါမပါစစ်တာက fastboot getvar anti ဆိုတဲ့ command နဲ့ပါ။4ဆို ပါပြီဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို သိထားပြီး တင်မယ့်ဟာက4နဲ့တူတယ် ကြီးတယ်ဆိုရင် OK ပါ။ TWRP flash တာက Anti စစ်တာ မပါတတ်လို့ ARB မပါတဲ့ rom ကိုတင်မိရင် 9008 ကနေမထွက်တော့ပဲ ဖုန်းမတက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သည်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းက Anti value ကို စစ်ပေးကြည့်ပါ။ ကိုယ်တင်မယ့် rom ရဲ့ fastboot firmware ထဲက flash_all.bat file လေးကို ဖွင့်စစ်ပါ။ အဲလိုလုပ်ရင် Anti မပါတာ တင်မိလို့ brick တာတွေ ကင်းဝေးပါမယ်။ ဖုန်းစက်ရုံကစထွက်ကတည်းက ARB ပါတာဆိုရင်တော့ သိပ်စစ်နေဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ROM ကလည်း မပါတာ ထွက်မှာမှမဟုတ်တော့တာ။ သည်တော့ ဖုန်း Model သစ်တွေမှာ Firmware ချိန်းပြောင်းချင်ရင် ARB လေးကို သတိထားပေါ့ခင်ဗျာ။ Google policy ကတော့ BLU လိုက်ရင် အဲဒါပျက်တာပါပဲ။ ကြိုက်တာ ကြိုက်သလို တင်လို့ရပါတယ်။ Xiaomi မှာတော့ BLU တာနဲ့ မပျက်ပါ။ Fastboot ကနေ firmware တင်တာတွေပဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲသည်အခွင့်အရေးပဲပေးပါတယ်။ Anti ရှိနေသားနဲ့ Anti မပါတာတင်မိရင် brick ပါတယ်။ အဓိကက Xiaomi Official rom တွေ တင်တာမှာပိုဆိုလိုပါတယ်။ Custom MIUI rom တွေမှာလဲ သတိထားဖတ်ကြည့်.. သူများတွေ တင်ထားတဲ့ reply တွေကို forum တွေမှာ ဖတ်ကြည့်လေ့လာပြီးမှ မိမိအဆင်ပြေတယ်ထင်မှ တင်သင့်ပါတယ်။
ARB ပါတဲ့ model တွေမှာ 9008 or EDL ကနေ firmware တင်တာလုပ်ရင် Authorized Mi Account ဆိုပြီးတောင်းပါတယ်။ အရင်က BLU လုပ်ဖို့ Acc ကို permission တောင်းထား ရထားသလို account ပါပဲ။ ပေးလဲ မပေးတော့ပါဘူး။ လူတိုင်းလဲ မရကြပါဘူး။ သည်တော့ ကလိတာမှာ EDL အဆင့်ရောက်လောက်သည်ထိ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ..။ အချို့သော ဖုန်း model အတွက်တော့ Authorized MI Account မလိုပဲ EDL ကနေတင်လို့ရမယ့် firehorse file တွေ ထွက်ပါတယ်။ XDA, 4PDA လိုတွေမှာ တင်ပေးပါတယ်။ တွေ့မိခဲ့ရင် ဒေါင်းသိမ်းထားပေါ့ခင်ဗျာ.. 😀
ကဲ… စပ်မိစပ်ရာများက တော်တော်ကို ရှည်လျားသွားပြီမို့ သည်လောက်နဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်ပါရစေခင်ဗျာ….။ 😀 😀
Published in General Tips and TWRP